Picasa Web Albums - Myo Chit
Myo Chit's Gallery
ရင်ခုန်နွေးထွေးဂီတညနေ (Los Angeles)
Bombs Blasted again in Yangon
သတင်းမူရင်း - http://myochitmyanmar.blogspot.com/2011/06/blog-post_24.html
မျိုးဆက်သစ်ကလေးငယ်များ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)သို့ အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းကို လာရောက်တက်ရောက်ကြရာတွင် တပျော်တပါး ၀မ်းသာအားရ ကြည်နူးမှုအပြည့်ဖြင့် နံနက် (၇း၀၀) နာရီအချိန်ကတည်းက လာရောက်ကြသည်။
သုခအဟာရ စားသောက်ဆိုင်တွင် စားသောက်သူ စားသောက်၊ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) ခြံဝင်းအတွင်း ဆော့ကစား၊ ဘဘ ဦးသုခကျောက်ရုပ် ပတ်ပတ်လည်တွင် စိန်ပြေးတန်း ကစားသူက ကစား၊ ဘဘဦးသုခ ကျောက်တိုင်ရှိ စာသားတချို့ကို ဖတ်သူက ဖတ်နှင့် ကလေးဘာသာဘာဝ ပျော်ပါးလျက်ရှိနေကြသည်။
သတင်းအပြည့်အစုံကို မူရင်း Link တွင် ဆက်လက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
သတင်း နှင့် ဓါတ်ပုံ များအား ကိုကျော်သူ မှ မေတ္တာဖြင့် ပေးပို့သည်။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.blogspot.com/2011/06/blog-post_22.html
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မွေးနေ့နှင့် မွေးနေ့တူ ဇွန်လ (၁၉) ရက်နေ့ဖွား မွေးနေ့ရှင်များ ယနေ့တွင် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)သို့ ထူးခြားစွာ လာရောက်ကုသိုလ်ဒါန ပြုခဲ့ကြသည်။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.blogspot.com/2011/06/blog-post_20.html
အမေ့ ရဲ့ မွေးနေ့မင်္ဂလာ
သတင်းဓါတ်ပုံ များအား ကိုကျော်သူ မှ မေတ္တာဖြင့် ပေးပို့သည်။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.blogspot.com/2011/06/blog-post_7113.html
အကယ်ဒမီဒေါ်နွဲ့နွဲ့မူ ခရစ်တော်၌ အိပ်ပျော်ခြင်း
ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီဒေါ်နွဲ့နွဲ့မူသည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ မေလမှစ၍ ကျန်းမာရေးချို့ယွင်း လာပြီး ရန်ကုန်အထွေထွေရောဂါကု ဆေးရုံသစ်ကြီး (ဂျပန်ဆေးရုံကြီး)၌ တတ်ရောက်ဆေးကုသမှု ခံယူနေစဉ် ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၁၃) ရက်နေ့ နံနက် (၅း၅၀) နာရီတွင် ခေါ်တော်မူခြင်းခံခဲ့ရသည်။
ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီဒေါ်နွဲ့နွဲ့မူသည် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပေါင်း (၁၀၀) ကျော်နှင့် ဗီဒီယို ဇာတ်ကားပေါင်းများစွာတို့ကို ထူးချွန်ထက်မြက်သော အနုပညာစွမ်းအား၊ အနုပညာပါဝါတို့ဖြင့် ရိုက်ကူးသရုပ်ဆောင်ခဲ့သော အစားထိုး၍ မရနိုင်သော အနုပညာရှင်စစ်စစ် တစ်ဦးဖြစ်သည်။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.blogspot.com/2011/06/blog-post_15.html
ကျိုက္ကစံစေတီတော်၊ ရန်မျိုးအောင်စေတီတော် ဂေါပကအဖွဲ့များ၏ သြ၀ါဒစရိယ ရွှေကျင် နိကာယရတ္တညူမဟာနာယက၊ သာသနဓဇ သိရီပ၀ရ ဓမ္မာစရိယ အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ၊ အဘိဓဇ အဂ္ဂမဟာ သဒ္ဓမ္မဇောတိက မဟာသိပ္ပံပရိယတ္တိစာသင်တိုက် ဦးစီးပဓာန နာယကဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ သိရိဓမ္မ (နိုင်ငံတော်သြ၀ါဒစရိယ) သက်တော် (၈၈) နှစ်၊ ၀ါတော် (၆၈) ၀ါ သည် ၇.၆.၂၀၁၁ ရက်နေ့ နံနက် (၁၁း၄၅) နာရီအချိန်တွင် ဘ၀နတ်ထံပျံလွန်တော်မူသွားပါ၍ မဟာသိပ္ပံပရိယတ္တိစာသင်တိုက်၌ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)ရှိ ရွှေစတီး ကရ၀ိတ်ဖောင်တော်ဖြင့် အပူဇော်ခံထားရှိပြီး ၁၃.၆. ၂၀၁၁ (တနင်္လာနေ့) နေ့လည် (၂း၀၀) နာရီအချိန်တွင် မဟာသိပ္ပံပရိယတ္တိစာသင်တိုက်မှ ရေဝေးသုဿန်သို့ နာရေးကူညီမှု အသင်း(ရန်ကုန်)၏ ဆရာတော်ကြီး၏ ပုံတော်တင်ဆောင်ရန် ရှေ့ပြေးမော်တော်ယာဉ်၊ ဆရာတော်ကြီး၏ ကျန်ရစ်သောရုပ်ကလပ်တော်အား အထူးနိဗ္ဗာန်ယာဉ်ဖြင့် ပင့်ဆောင်ကာ စည်ကား သိုက်မြိုက်စွာဖြင့် အန္တိမဈာပနအခမ်းအနားအား ကျင်းပပြုလုပ်ပေးခဲ့သည်။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.blogspot.com/2011/06/blog-post_9446.html
နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)ရှိ သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း၏ ညီငယ်ဟုဆိုအပ်သော သုခ ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း(ပြည်)အား မိုးမေတ္တာပရဟိတ သွေးလှူအဖွဲ့လူငယ်များဦးစီးကာ ၈.၆.၂၀၁၁ (ဗုဒ္ဓဟူး) နေ့တွင် ပြည်မြို့၊ ရွာဘဲနယ်မြေရှိ “ရတနာမာန်အောင်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတိုက်” ရှိ အဆောက်အဦးတွင် စတင်စမ်းသပ်ဖွင့်လှစ်ကာ အခမဲ့ ကုသပေးလျှက်ရှိသည်။
သုခကုသိုလ်ဖြစ် ဆေးခန်း(ပြည်)အား ပြည်မြို့ရှိ ဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာထွန်းနိုင် ဦးစီး၍ ဆရာဝန် (၄) ဦးတို့ဖြင့် ရဟန်းသံဃာ အများပြည်သူတို့အား အခမဲ့ကျန်းမာရေးကို ကုသဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။
ယင်းကဲ့သို့ စမ်းသပ်ကာလတွင် လူမျိုးဘာသာ ဆင်းရဲချမ်းသာမရွေး ရဟန်းသံဃာတော်၊ သီလရှင် များကို ကုသပေးရာတွင် ၈.၆.၂၀၁၁ (ဗုဒ္ဓဟူး)နေ့တွင် စုစုပေါင်းလူနာ (၃၅)ဦးနှင့် ၉.၆.၂၀၁၁ (ကြာသပတေး)နေ့တွင် လူနာ (၅၄)ဦးတို့အား ကုသပေးခဲ့သည်။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.blogspot.com/2011/06/blog-post_09.html
လေးဆူဓါတ်ပုံရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီးအား ကျွန်တော်မဖူးမြှော်ရသည်မှာ လေးနှစ်တာ ကာလအတွင်းသို့ ရောက်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
ကုန်လွန်ခဲ့ပြီးသောကာလ ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလမတိုင်မီ အချိန်များတွင် ကျွန်တော် သည် တစ်ပါတ်လျှင် တစ်ကြိမ်အနည်းဆုံး ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီး၏ ရင်ပြင်တော်ပေါ်သို့ တက်ရောက်ဖူးမြှော်ခဲ့ဖူးပါသည်။
ထို့အပြင် တက်ရောက်ကြည်ညို ဖူးမြှော်ခွင့်ရခဲလှသော ရွှေတိဂုံ စေတီတော်မြတ်ကြီး၏ အထွဋ်အထိပ်တွင် တည်ရှိနေသော စိန်ဖူးတော်ကြီးအားလည်း ကျွန်တော်နှင့် ကျွန်တော်၏သား ပြည်သိမ်းကျော်တို့ တက်ရောက်ဖူးမြှော်ခဲ့ဘူးပါသည်။
John McCain နှင့် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)
အမေရိကန်နိုင်ငံ အထက်လွှတ်တော်အမတ် John McCain နှင့် အမေရိကန်သံရုံးအရာရှိ များသည် ၂.၆.၂၀၁၁ (ကြာသပတေး)နေ့ နံနက် (၁၁း၀၀) နာရီအချိန်တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ မြောက်ဒဂုံ မြို့နယ်၊ ဗိုလ်မှူးဗထူးလမ်းရှိ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)သို့ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်သူ၊ ၊ ဒေါ်မြင့်မြင့်ခင်ဖေ ၊ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်သန်းမြင့်အောင်နှင့် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့များ၊ အသင်းသူ/သားများနှင့် လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ထို့ပြင် လူမှုရေးမျိုး ဆက်သစ်သင်တန်း မှ သင်တန်းသူ/သားများနှင့် တွေ့ဆုံကာ “မိမိကိုယ်မိမိ ကယ်ဆယ်ခွင့် မရရှိသူတွေကို နာရေးကူညီမှုအသင်း ရဲ့ လူမှုရေးသမားများက ၀ိုင်းဝန်း ကယ်ဆယ် အကူအညီများပေးနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါတယ်။ ဘုရားသခင်မှလည်း ကောင်းချီးပေးပါစေ” ဟု အားပေးစကားများ ပြောကြားခဲ့ပြီးနောက် ဧည့်သည်တော်မှတ်တမ်း စာအုပ်တွင် ဆုတောင်းမေတ္တာပို့စာသား ရေးသားလက်မှတ်ထိုးကာ မွန်းတည့် (၁၂း၀၀) နာရီအချိန် တွင် နှုတ်ခွန်း ဆက်ကာ ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့သည်။
သတင်း မူရင်း -
နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)ရှိ သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်းတွင် လူမျိုးဘာသာ၊ ဆင်းရဲချမ်း သာမရွေးတို့၏ ရောဂါဝေဒနာများကို အခမဲ့ ကုသပေးလျှက်ရှိရာ နေ့စဉ် လူနာစုစုပေါင်း (၂၀၀) ကျော် ကို အခမဲ့ကုသပေးလျှက်ရှိသည်။ သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်းသည် ဆေးခန်းသန့်ရှင်းရေး၊ ပိုးမွှားများ သန့်စင်ရေးအတွက် လကုန်ရက် (၁) ရက်တည်းသာ ပိတ်ရက်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပြီး စေတနာရှင် ဆရာဝန်ကြီးများ (၅၀) ဦးခန့်ဖြင့် အခမဲ့ ကုသပေးလျှက်ရှိသည်။ ထိုသို့ကုသပေးရာတွင် မျက်စိ၊ အရိုး အကြော၊ နား နှာခေါင်း လည်ချောင်း၊ မီးယပ်သားဖွား၊ အပ်စိုက်၊ အရေပြား၊ ကလေးအထူးကု၊ အထွေထွေရောဂါ၊ အသေးစားခွဲစိတ်မှုများ၊ ဓါတ်ခွဲခန်း၊ ဓါတ်မှန်ခန်း၊ E.C.G၊ U.S.Gနှင့် မကြာမီ ရက်ပိုင်းအတွင်း မျက်စိခွဲစိတ်ခန်းကိုပါ ဖွင့်လှစ်နိုင်တော့မည်ဖြစ်သည်။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/7239-2011-05-28-02-41-07
နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)တွင် မျိုးဆက်သစ်ကလေးငယ်များအား နွေရာသီ အခြေခံ အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းအား ၂၀၁၁ ခုနှစ်၌ ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် ၅.၃.၂၀၁၁ နေ့တွင် Levels အလိုက် ခွဲခြားရန် စမ်းသပ်ဖြေဆိုမှုများကို စတင်ဖြေဆိုခဲ့ပြီး ၁၄.၃.၂၀၁၁ (တနင်္လာ)နေ့မှစ၍ မျိုးဆက်သစ် ကလေးငယ် အယောက် (၅၀၀) ကျော်တို့အား လုပ်အားပေး ဆရာ/မ (၁၄) ဦးတို့မှ တစ်ပါတ်လျှင် (၆) ရက်၊ Group (၄) ခုနှင့် Section (၁၅)ခုခွဲ၍ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/7240-2011-05-28-02-56-36
နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ မျိုးဆက်သစ်တို့အတွက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် နွေရာသီအခြေခံ ပန်းချီသင်တန်းဆင်းပွဲတွင် “ အဖြူထည်တို့၏ပွဲ ” ဟူ၍ ပန်းချီပြပွဲ ကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
ယခု ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် အင်္ဂလိပ်စာအခြေခံသင်တန်းနှင့်တကွ ပန်းချီပညာရပ်ကိုလည်း စိတ်ဝင်စားသော မျိုးဆက် သစ်ကလေးများအား ဆရာ ဦးဝင်းကြည်၊ ဒေါ်နုနုနှင့် ဒေါ်ရီရီခင်တို့မှ သင်ကြားပို့ချပေးခဲ့သည်
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/7237-2011-05-27-01-17-28
၂၁.၅.၂၀၁၁ (စနေ) နေ့တွင် ကွယ်လွန်သွားသော ဦးကျော်စိန် အသက် (၉၆) နှစ်၏ ရုပ်အလောင်းအား အဝေးရောက်နေသော ဆွေမျိုးသားချင်း ညီအစ်ကို မောင်နှမ မြေးမြစ်များ နောက်ဆုံး ကြည့်ရှုဂါရ၀ပြုကြရန် ရည်ရွယ်၍ မိမိတို့ နေအိမ်ရှိရာ အမှတ် (၉၆)၊ ၁၁ လမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် (၃) ရက်ထားရှိရန်အတွက် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)သို့ ဆက်သွယ် အကူအညီတောင်းခံလာခဲ့သည်။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/7235-2011-05-24-03-43-03
၁၄.၅.၂၀၁၁ (စနေနေ့) နံနက် (၁၀း၀၀) နာရီအချိန်တွင် အမှတ် - ၁၂/B၊ ပြည်သာယာလမ်း၊ ဘောက်ထော်၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်မှ ဦးကျော်ဝင်း + ဒေါ်ညိုညို (မိသားစု)မှ ပြည်သာယာဓမ္မရုံ၌ သီတဂူရွှေပြည်ဟိန်း စက္ခုဒါနဆေးရုံ၊ ဓါတ်လှေကားတပ်ဆင်မှုအတွက် မတည်လှူဒါန်းမှုနှင့် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)အတွက် (Sunny Pick-up) မော်တော်ယာဉ်လှူဒါန်း ပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပခဲ့ပါသည်။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/7232-2011-05-15-18-01-07
" အ၀င် နဲ့ အထွက် "
ကမ္ဘာမြေပြင်ပေါ်သို့ ရောက်ရှိလာသူများရှိသလို၊ ကမ္ဘာမြေပြင်မှ ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားသူများ သည်လည်း ဒုနဲ့ဒေး။
ကမ္ဘာမြေပြင်ပေါ်တွင် ရောက်ရှိပြီး သံသရာတွင်ကျင်လည် ကျက်စားကြရင်း သက်တမ်းမကုန်မီစပ်ကြား ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားသူတို့သည်လည်း ဒုနဲ့ဒေး။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/7230-q----q
Thidagu Donates FFSS
စန်းလပမာ ချမ်းမြသာယာစေသော သီတဂူ
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သီတဂူသာသနာပြုအဖွဲ့မှ အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ၊ အဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိက ဓဇ၊ မဟာဓမ္မကထိက ဗဟုဇနဟိတဓရ အဂ္ဂမဟာဂန္ထ၀ါစကပဏ္ဍိတ သီတဂူကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်၏ အဓိပတိဆရာတော် ဒေါက်တာအရှင်ဉာဏိဿရ (D.Litt) (Ph.D) သည် နာရေးကူညီမှု၊ ဆေးကူညီမှု၊ ပညာရေးကဏ္ဍများအား စဉ်ဆက်မပျက် ပေးဆပ်လျှက်ရှိသော နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) အတွက် ရုပ်ကလပ်(အလောင်း)အား ပြင်ဆင်ထားရှိချိန်တွင် အသုံးပြုထားရှိရန်အတွက် လေအေး စနစ်သုံး လက်တွန်းလှည်း (၄) စီးအား လှူဒါန်းပေးခဲ့ပါသည်။ ယင်း လေအေးစနစ်သုံး လက်တွန်း လှည်းအား ဘ၀နတ်ထံပျံလွန်တော်မူသွားသော ဆရာတော် သံဃာတော်များနှင့် ဘ၀တစ်ပါးသို့ ကူးပြောင်းသွားသော လူပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများနှင့် နေအိမ်များ၌ ခေတ္တခဏ ထားရှိနိုင်ရန် ကူညီဖေးမပေးနိုင်တော့မည် ဖြစ်ပါသည်။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/7226-2011-05-07-18-11-04
နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)သည် အများပြည်သူတို့အား နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ပိတ်ရက်မရှိ (အခမဲ့) ထမ်းဆောင်ပေးဆပ်နေကြသည့် ၀န်ထမ်းများအား တွေ့ဆုံအစည်းအဝေးပွဲကို ၂.၅.၂၀၁၁ (တနင်္လာ) နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးပွဲ၌ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်သန်းမြင့်အောင်က ၀န်ထမ်းများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် စည်းကမ်းချက်များအချို့နှင့် ဒေါ်ဧရာမောင်မောင်ကလည်း ၀န်ထမ်းများအတွက် ငွေစုငွေကြေးကိစ္စများအား ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/7227-2011-05-07-18-14-52
၂၃.၄.၂၀၁၁ (စနေ) နေ့တွင် နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) ၏ ၁၀ နှစ်ပြည့် အခမ်းအနား အား နံနက် (၉း၀၀) နာရီအချိန်တွင် စာရေးဆရာ၊ ဒါရိုက်တာ၊ နာယကကြီး ကျေးဇူးရှင် ဘဘဦးသုခ ၏ ရုပ်ထုဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားဖြင့် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။
ဘဘဦးသုခ၏ ရုပ်ထုမျက်နှာပြင်စတင်၍ ကတ္တီပါအခန်းဆီး မျက်နှာပြင်အကွယ်မှ ပေါ်ပေါက်လာစဉ် ဘဘဦးသုခ၏ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ မိခင် (အမေ) များအား ဂုဏ်ပြုစကားသံတို့သည် အရပ်ရှစ်မျက်နှာတွင် လွှမ်းခြုံ၍ ပေါ်ပေါက်လာတော့သည်။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/7225-2011-04-26-07-57-11
မြန်မာပြည် လွတ်လပ်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းခဲ့သော အာဇာနည်ကြီးများ၏ သမိုင်း၊ အတ္ထုပ္ပတိ၊ ရာဇ၀င် အမည်နာမများကို ယခုမျိုးဆက်သစ်ကလေးငယ်များ အတော်များများတို့သည် မသိရှိကြချေ။ အဘယ့်ကြောင့်နည်း သမိုင်းများကို ဖုံးကွယ်ထားခြင်းကြောင့်လား။ သမိုင်းများကို ဖျောက်ဖျက်ထား ခြင်းကြောင့်လား။ သမိုင်းများကို လစ်လျှူရှုထားခြင်းကြောင့်လား။ သမိုင်းများကို ထိမ်ချန်ထားခြင်း ကြောင့်လားတော့ မသိချေ။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/7224-2011-04-22-02-52-22
" လက်ခုပ်ထဲကရေ "
ယာဉ်မောင်းသူတို့ ဆင်ခြင်ရန်၊ ယာဉ်မောင်းသူတို့ သတိရှိရန်၊ ယာဉ်မောင်းသူတို့ စည်းကမ်းရှိ ရန် သတိပေးချက်များတွင်
“သင့်လက်ထဲတွင် ခရီးသည်တို့၏ အသက်ရှိသည်။”
“ဇနီးသားသမီးများက သင်ဘေးမသီရန်မခ အိမ်ပြန်လာချိန်ကို စောင့်မျှော်နေသည် ကို သတိပြု” ......
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/7221-q--q
နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)သည် သင်္ကြန်အကြိုနေ့၊ အကျနေ့၊ အကြတ်နေ့၊ အတက်နေ့ စသည့် သင်္ကြန်တွင်းကာလတွင် နာရေးကူညီမှုပေါင်း (၁၇၅) ဦးတို့အား အခမဲ့ ကူညီဖေးမ သင်္ဂြိုလ်ပေးခဲ့သည်။
သင်္ကြန်အတက်နေ့ည (၁၂း၀၀) နာရီအချိန်ထိ ကူညီမှုများကို ပြုလုပ်ပေးခဲ့သည်။ သင်္ကြန်တွင်း ကာလတွင် နာရေးကူညီမှုများ ထမ်းဆောင်ပေးဆပ်ရာ၌ နာရေးလမ်းကြောင်း ကားလမ်းမပေါ်တွင် သင်္ကြန်ရေကစားမဏ္ဍပ်များ ဆောက်လုပ်ထားမှုကြောင့် နိဗ္ဗာန်ယာဉ် ၀င်/ထွက် သွားလာရာ၌ အခက် အခဲရှိခြင်း၊ စင်တင်တေးဂီတ ဖျော်ဖြေပွဲများကြောင့် လမ်းပိတ်ဆို့မှုများ ဖြစ်ပေါ်စေသောကြောင့် ကူညီ မှုအချိန် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာခြင်းများ ရှိခဲ့သည်။
သို့သော် မြန်မာပြည်သူလူထုတို့၏ လူသားချင်းစာနာ စိတ်ဓါတ်ကြောင့် ၀ိုင်းဝန်းကူညီကာ လမ်းရှင်းပေးခြင်း၊ ပိတ်ဆို့မှုများအား ဖယ်ရှားပေးခြင်းတို့ကြောင့် အခက်အခဲများ ချောမွေ့စေခဲ့သည်။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/7222-2011-04-18-16-09-03
မဟာသင်္ကြန်ပွဲတော်အပြီး ၂၃.၄.၂၀၁၁ (စနေ) နေ့တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်သော နာရေးကူညီမှု အသင်း(ရန်ကုန်)၏ (၁၀) နှစ်မြောက် ဈေးရောင်းပွဲအခမ်းအနားအား နံနက် (၉း၀၀) နာရီမှ ညနေ (၄း၀၀) နာရီအထိ စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) ၁၀ နှစ်ပြည့် အခမ်းအနားတွင် ကျေးဇူးရှင် စာရေးဆရာ၊ ဒါရိုက်တာ နာယကကြီး ဘဘ ဦးသုခအား ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတင်သည့်အနေဖြင့် ဘဘ ဦးသုခ၏ ကျောက်ရုပ်ဖွင့်ပွဲကိုပါ နံနက် (၉း၀၀) နာရီအချိန်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ရန် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)အား စတင်မျိုးစေ့ချပေးခဲ့သော ဘဘ ဦးသုခအား နောင်လာနောင်သားများ သိရှိအမှတ်ရစေလိုသော ဆန္ဒဖြင့် ဘဘ ဦးသုခ၏ ရုပ်ထုအားထုလုပ်ကာ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) ရုံးချုပ်ရှေ့ မြက်ခင်း ပြင်တွင် ထားရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/7220-2011-04-15-01-30-33
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ထင်ရှားကျော်ကြားပြီးလူအများ၏ ချစ်ခင်လေးစားခြင်းခံရသောစာပေပညာရှင် စာရေးဆရာကြီးပါရဂူ (ခ) ဦးလှကြိုင် အသက် (၉၀) နှစ်သည် ၉.၄.၂၀၁၁ (စနေနေ့) နံနက် (၁၀း၀၀) နာရီတွင် အာရှတော်ဝန်ဆေးခန်း၌ ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်ရှိခဲ့ပြီး ၁၁.၄.၂၀၁၁ (တနင်္လာနေ့) ညနေ (၅း၀၀) နာရီအချိန်တွင် ရေဝေးသုဿန်၌ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) အစီအစဉ်ဖြင့် မီးသင်္ဂြိုလ် ခြင်းအခမ်းအနားကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/7219-2011-04-15-01-26-01
၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဒေါ်ပတ္တမြားခင်မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်ဆွမ်းကျွေးအလှူပွဲကို ပြည်လမ်းရှိ တိပိဋကတ်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၌ ကျင်းပစဉ် ဆရာပါရဂူမှ “ကိုကျော်သူ ခင်ဗျားရဲ့ အတ္ထုပတ္တိ၊ ခင်ဗျားရဲ့ သမိုင်းကြောင်းစာအုပ်ကို ကျွန်တော်ရေးအုံးမယ်ဗျာ” တဲ့။
၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၂) ရက်နေ့ ကျွန်တော်၏ မွေးနေ့ပွဲအမှတ်တရအဖြစ် Kyaw Thu’s Art Zone ပန်းချီပြပွဲလုပ်စဉ်က “ကိုကျော်သူ ခင်ဗျားက စုတ်တံကိုင်ပြီး တော်လှန်ရေးလုပ်နေတဲ့ သူရဲကောင်းပဲ။ ခင်ဗျားရဲ့အကြောင်းကို ကျွန်တော်ရေးအုံးမယ်ဗျာ” တဲ့။
၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ နေမျိုးဆေးရဲ့ ပန်းချီပြပွဲမှာ နောက်တစ်ကြိမ် “ကိုကျော်သူ ခင်ဗျားတို့ သုခအလင်း စာကြည့်တိုက်ကို ကျွန်တော် ပါရဂူရှန်တိနိကေတန် စာကြည့်တိုက်က စာအုပ်တွေ လှူချင်တယ်ဗျာ။ လာယူအုံး။ ကိုကျော်သူက တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ အနုပညာသမား” တဲ့။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/7218-2011-04-15-01-17-34
နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)သည် မျိုးဆက်သစ် ကလေးငယ်များအတွက် နွေရာသီ အခြေခံအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း၊ ယဉ်ကျေးလိမ္မာသင်တန်း၊ ပန်းချီသင်တန်း၊ အကသင်တန်း စသည်တို့ ကို သင်ကြားပေးလျှက်ရှိသလို လူလတ်ပိုင်း၊ လူကြီးပိုင်းများအတွက် အင်္ဂလိပ်စာ အဆင့်မြင့် (4 Skill) သင်တန်းများ၊ ပင်အိုရွက်နု ပန်းချီသင်တန်း၊ နာရေးကူညီမှု လူမှုရေးသင်တန်းများအပြင် “ဓမ္မလမ်းကို လျှောက်ကြမယ်” ဟူသောခေါင်းစဉ်ဖြင့် ၀ိပဿနာသင်တန်းကိုလည်း စတင်မျိုးစေ့ချ သင်ကြားပေး နေပြီ ဖြစ်ပါသည်။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/7213-2011-04-03-00-55-49
ပြည်တွင်း/ပ သာသနာပြု မွန်ဆရာတော်ကြီး ဘဒ္ဒန္တသီလ၀န္တသည် ၁၉၅၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၇ ခုနှစ် အထိ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း (၁၄) နိုင်ငံသို့ သွားရောက်ပြီး တရားပို့ချခြင်း၊ မေတ္တာဘာဝနာပွားများခြင်း၊ စေတီများ တည်ထားခြင်းဖြင့် သာသနာပြုလုပ်ငန်းများကို သယ်ပိုးဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ဆရာတော်ကြီး တည်ထားခဲ့သော ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအရပ်ရပ်မှ ဘုရားစေတီများမှာ - ...
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/7212-2011-04-03-00-39-37
၂၀၁၀ ခုနှစ် ဧပြီလတွင်း ပူပြင်းလှသော ရာသီဥတုဒဏ်ကြောင့် သောက်သုံးရေ ရှားပါး မှုများ မြန်မာပြည်အနှံ အများပြည်သူတို့ ခံစားခဲ့ကြရ၍ ပြည်တွင်း/ပမှ ပြည်သူလူထုတို့သည် လူသားချင်း စာနာစိတ်မွေးဖွား ပေါ်ပေါက်လာကာ ဒုက္ခသည်များ နေထိုင်ရာအရပ်ဒေသများသို့ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)မှ တဆင့်ရေတွင်း၊ ရေကန်၊ အ၀ီစိတွင်းများ တူးဖော်နိုင်ရန်အတွက် အလှူငွေများ လှူဒါန်းခဲ့ကြသည်။
ထိုသို့ ရေဒုက္ခသည် အရပ်ဒေသများသို့ ရေတူးဖော်မှု၊ အုတ်ကန် တည်ဆောက်ပေးမှု၊ ရေစုပ်စက်များ လှူဒါန်းမှုတို့ကို ယခု ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဧပြီလအထိ လုပ်ဆောင် လှူဒါန်းပေးနေရဆဲ ဖြစ်သည်။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/7211-2011-04-03-00-21-57
၂၁.၃.၂၀၁၁ (တနင်္လာနေ့) နံနက် (၈း၀၀) နာရီတွင် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) ဈာပန လမ်းကြောင်းလက်ခံရာ ရုံးခန်းတွင် ၀န်ထမ်းများ၊ အသင်းသူ/သားများ၊ ၀တ်ရွတ်အဖွဲ့၊ ဓါတ်ပုံပညာရှင် များတို့သည် တယ်လီဖုန်းမြည်သံကို နားစွင့်နေကြသည်။ နံနက် (၉း၀၀) နာရီအချိန်တွင် မြောက်ဒဂုံ မြို့နယ်၊ ၄၉ ရပ်ကွက်၊ ငုဝါမြိုင်(၁)လမ်းနေ ဦးချစ်ဟန် အသက် (၇၈) နှစ်၏ နာရေးလမ်းကြောင်း အကူအညီ တောင်းခံလာခဲ့သည်။ ဦးချစ်ဟန် အသက် (၇၈) နှစ်သည် နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်)၏ နာရေးကူညီမှုပေါင်း (၁) သိန်းတိတိပြည့်သော နာရေးလမ်းကြောင်းပင် ဖြစ်တော့သည်။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/7201-q--q
နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) အသင်းသူ/သားများသည် ၁၈.၃.၂၀၁၁ (သောကြာ) နေ့တွင် ပြည်မြို့ ရွှေပေါက်ပင်တောရကျောင်းတိုက်သို့ သွားရောက်ပြီး ဒဿမအကြိမ်မြောက် မဟာအလှူ တော်မင်္ဂလာပွဲသို့ သွားရောက်ကာ ရွှေရန်ပြေဘုရားကြီး ရွှေသင်္ကန်းကပ်လှူပူဇော်ပွဲ၊ မြတ်စွယ်တော် အပူဇော်ခံပွဲ၊ သစ်သီဆွမ်းကပ်လှူပူဇော်ပွဲ၊ စုပေါင်းရဟန်းခံရှင်ပြုပွဲ၊ ဖိုးသူတော်ဝတ်ပွဲ၊ မယ်သီလရှင် ၀တ်ပွဲ၊ မဟာပဋ္ဌာန်းရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပွဲ၊ ပျားကြီးတောင်သခင်မကြီး ၀တ်လဲတော်ကပ်လှူပွဲ၊ ရွှေပေါက်ပင် ဘိုးဘိုးကြီးအား ၀တ်ရုံသစ်ကပ်လှူပွဲနှင့် နိဗ္ဗာန်ဈေးပွဲတော်တို့ကို ၁၃.၃.၂၀၁၁ မှ ၁၉.၃.၂၀၁၁ အထိ (၇) ရက်တိုင်တိုင် ကျင်းပပြုလုပ်သော မဟာအလှူတော်မင်္ဂလာ ပွဲတော်ကြီးသို့သွားရောက် ကုသိုလ် ယူခဲ့ကြသည်။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/7199-2011-03-21-06-00-40
Taiwan Super Idol မှ အောင်မြင်လာသူ အဆိုတော် ဇော်ဇော် (ခ) Chao, Tai-Hsiang မှ L.A တွင် ဖျော်ဖြေသီဆို
ဒီနေ့ညနေ ၇ နာရီ လောက်က မမသီတာ လာခေါ်တာနဲ့ ထိုင်ဝမ်က နာမည်ကြီးရှိုး တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Super Idol ဆိုတဲ့ American Idol ပုံစံအတိုင်း သီချင်းအဆိုရှင် တစ်ဦးကို ရွေးချယ်တဲ့ အစီအစဉ်မှာ အောင်မြင်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ Chao, Tai-Hsiang မြန်မာအမည် ဇော်ဇော် ဆိုတဲ့ မြန်မာ တိုင်းရင်းသား လူငယ်လေး က Los Angeles ကို အလည်အပါတ်လာရောက်ရင်း မြို့ခံများကို ဂီတ နဲ့ ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။
အခမ်းအနားကို ကျွန်တော်တို့ သီချင်းဆိုပွဲတွေ လုပ်နေကျ ဒေါက်တာ ဦးဇော်ထွန်း နဲ့ အန်တီ စန္ဒီ တို့ ပိုင်တဲ့ အောင်ဇေခန်းမ မှာ ညနေ ၆ နာရီ ခွဲ လောက်က စတင်ကျင်းပခဲ့ပြီး L.A မှ မြို့မိမြို့ဖများ အထူးသဖြင့် တရုပ်-မြန်မာ အများအပြား တက်ရောက် အားပေးခဲ့ကြပါတယ်။
မှတ်ချက် ။ ။ သားကြီးကို အမြဲ VIP နေရာပေးရပ်တဲ့ အန်တီစန္ဒီ နဲ့ ဦးဇော်ထွန်း ကို ကျေးဇူးပါ အထူးသဖြင့် ဒီနေ့ ည ပေါ့နော် :D
ကျေးဇူးအတင်ဆုံးကတော့ အသွားအပြန် ကားလိုက်မောင်းပေးပြီး ထမင်းပါဝယ်ကျွေးသွားတဲ့ မမသီတာ ပါဘဲ
<3 U Sis
သတင်းမူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/7173-taiwan-super-idol-chao-tai-hsiang
ကျန်းမာခြင်းသည် လာဘ်တစ်ပါး ဟူသော စကားအရ ကျန်းမာခြင်း သည် လူသားများအတွက် အဓိကဖြစ်တော့သည်။ ကျန်းမာကောင်းမွန်လျှင် စားဝတ်နေရေး၊ ပညာရေး စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများကို စွမ်းစွမ်းတမန် လုပ်ကိုင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကျန်းမာရေး ကို အထူးဂရုစိုက်ကြသည်။ အထူးအားဖြင့် မြန်မာပြည်သူ/သား အများစုသည် ကျန်းမာရေးကို အထူး ဂရုမစိုက်နိုင်ကြချေ။ ဆေးကုသစရိတ် မြှင့်မားခြင်းတို့ကြောင့် အခပေး ဆေးရုံဆေးခန်းများသို့ သွားရောက်ကုသခြင်း မပြုလုပ်နိုင်ကြချေ။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/7181-2011-03-06-13-59-13
၂၀၁၀ ခုနှစ် ပထမအကြိမ် အခြေခံအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းတွင် ကလေးငယ်ပေါင်း (၄၀) ဦးခန့် သာ ရှိခဲ့သော်လည်း ယခု ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ဒုတိယအကြိမ် နွေရာသီအခြေခံ အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း တက်ရောက်ရန် လာရောက်၍ စာရင်းပေးသွင်းကာ သင်တန်း Levels ခွဲခြားရန်အတွက် စမ်းသပ် ဖြေဆိုမှုများကို ၅.၃.၂၀၁၁ (စနေနေ့) နံနက် (၉း၀၀) နာရီအချိန်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ရာ မျိုးဆက်သစ် ကလေးငယ် စုစုပေါင်း (၅၀၀) ဦးရေခန့် တက်ရောက်ဖြေဆိုခဲ့ကြသည်။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/7180-2011-03-06-13-52-31
နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ (၁) ရက်နေ့တွင် (၁၀) နှစ် ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်သလို “သုခကုသိုလ်ဖြစ် ဆေးခန်း” သည်လည်း ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ မတ် (၂) ရက်နေ့တွင် (၄) နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂) ရက်နေ့မှစ၍ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများ၊ ဆေးဝါးကုသပေးမှုများ၊ တစ်ကြိမ်တည်း အသက်နှစ်ချောင်း ကယ်ရာရောက်သည့် ခွဲစိတ်မွေးဖွားမည့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များအား ကူညီဖေးမ ခွဲစိတ်မွေးဖွားပေးမှုများကို လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ရာမှ ယခုဆိုလျှင် ဓါတ်ခွဲခန်း၊ ရောဂါရှာဖွေရေး တီဗီ ဓါတ်မှန်ခန်း၊ သွားရောဂါကုသမှု၊ မျက်စိဝေဒနာရှင်များအား ကုသပေးမှု၊ ကလေးအထူးကု၊ အရေပြား အထူးကု၊ နား နှာခေါင်း လည်ချောင်း အထူးကု၊ အပ်စိုက်အထူးကု၊ အရိုးအကြော အထူးကုနှင့် အထွေထွေရောဂါ ကုသမှုများအပြင် မျက်စိခွဲစိတ်ခန်းအားလည်း ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ အတွင်းတွင် စတင်၍ ခွဲစိတ်ပေးမှုများကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်တော့မည် ဖြစ်ပါသည်
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/7169-2011-03-03-07-23-18
နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ သန္ဓေတည်ခဲ့ပုံမှာ ကျေးဇူးရှင် စာရေးဆရာ/ဒါရိုက်တာကြီး ဘဘ ဦးသုခ ဆေးရုံတက်စဉ်အချိန်ကာလမှ စတည်ခဲ့ပါသည်။ ဘဘ ဦးသုခ၏ ဆေးရုံကုတင် နံဘေး တွင် ဆေးဝါးလာရောက်ကုသနေသော အမေအိုကြီးကို အမေအိုကြီး၏ မိသားစုမှ နေ့စဉ် အမေအိုကြီး အား လာရောက်ကြည့်ရှုအားပေး ခဲ့ကြသည်။ အမေအိုကြီး၏ မိသားစုသည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးလှသော မိသားစုဖြစ်သည်။ တစ်ရက်တွင် အမေအိုကြီး၏ မိသားစုအား သက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်ကြီးမှ အမေအို ကြီးအား နေအိမ်သို့ ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လိုပါက ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း ဆေးဝါးကုသမှု အပိုင်းကဏ္ဍသည်လည်း အစွမ်းကုန်ကုသပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း သို့သော် အမေအိုကြီး၏ ရောဂါသည် ကျွမ်းနေပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ထိုနေ့မှစ၍ အမေအိုကြီး၏ မိသားစုသည် ဆေးရုံသို့ လာရောက်ခြင်း မပြုခဲ့သည်ကို ဘဘ ဦးသုခ သတိထားမိသည်။ အကြောင်းမှာ...
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/7168-2011-03-03-07-17-46
စေတနာ ၀ါသနာ အနစ်နာ အကြင်နာ … တို့ကုသိုလ် အနိမ့်ဆုံး အလုပ်နဲ့ မြတ်တဲ့ ခိုင်မာစိတ်ထားများ … ဝေဒနာ မရေရာ ဘ၀တစ်ကွေ့ဆုံလာ … တို့လက်တွေ စုစည်းဖေးမကြမယ် ဖြူစင်သန့်ရှင်းစွာ xxx ခရီးတစ်ခုတည်း တို့များအတူတူ … တစ်မိုးတည်းအောက် သားချင်းတွေ ရိုင်းပင်းမလေ … ဗြဟ္မစိုရ် နှလုံးသားနဲ့လူတွေ (ဗြဟ္မစိုရ်ခရီးကိုသွားစို့လေ) … ကြုံရဆုံရ လူ့ဘ၀ ခဏလေးအတွင်း ညှာတာစိတ်နဲ့ … လူသားချင်း အကြင်နာမျိုးစေ့ xxx ဘယ်အရာ မသေချာ အဖြစ်အပျက်ခန္ဓာ … ရှုမှတ်ပါ လူဖြစ်ရတဲ့အခိုက်မှာ အချိန်တွေဟာမမြဲပါ … ဝေဒနာ မရေရာ ဘ၀တစ်ကွေ့ဆုံလာ … တို့လက်တွေ စုစည်းဖေးမကြမယ် ဖြူစင်သန့်ရှင်းစွာ xxx ဗြဟ္မစိုရ်နှလုံးသားနဲ့လူတွေ (ဗြဟ္မစိုရ်ခရီးကိုသွားစို့လေ)
အထက်ပါ သီချင်းစာသားသည် တေးရေး - ဖိုးဆောင်းသည် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) အတွက်ရေးစပ်၍ ထက်ဆောင်လှိုင်၊ အိလှိုင်ဦး၊ ဖိုးဆောင်းတို့ သီဆိုပေးထားသော “ဗြဟ္မစိုရ်ခရီး” အမည်ရှိ တေးသီချင်းဖြစ်သည်။
သတင်းအပြည့်အစုံကို မူရင်း Link တွင် ဆက်လက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/7153-2011-02-17-07-06-43
ရန်ကုန်မြို့၊ ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်၊ သခင်ဖိုးလှကြီးလမ်း၊ အမှတ် (၄၄/၃၃၅)နေ ဦးလှခိုင် + ဒေါ်ဒေါင်နောတို့၏ သား - မောင်ညီထွေးခိုင် REX Marine Engineering Pte Ltd. (Singapore) နှင့် ရန်ကုန်မြို့၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ဗျိုင်းရေအိုးစဉ်ရွာမရပ်ကွက်၊ ရတနာလမ်း၊ အမှတ် (၈) နေ ဦးအုန်းကြိုင် + ဒေါ်နုနုဆွေတို့၏ သမီး - မတင်ဇာလင်း Blue Scope Steel Lysaght (Singapore) Pte Ltd. တို့ကို မိဘတို့ဝတ်တရားရှိသည့်အတိုင်း ထိမ်းမြားမင်္ဂလာဆောင်နှင်းပြီး ၁၅.၂.၂၀၁၁ (အင်္ဂါ) နေ့တွင် နတ်မောက်လမ်းရှိ မိုးကုတ်ဝိပဿနာခန်းမတွင် မင်္ဂလာဦးဆွမ်းကျွေးကို ကျင်းပပြီးစီးသည့်နောက် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)သို့ အလှူငွေကျပ် ၂၀၀၀၀၀/- (နှစ်သိန်း ကျပ်) ကို လာရောက်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/7154-2011-02-17-07-07-49
(၁)နှစ်သား “သုခအလင်း” စာကြည့်တိုက်
ယနေ့ ၁၃.၂.၂၀၁၁ ရက်နေ့ (ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမွေးနေ့) သည် “သုခအလင်း” စာကြည့်တိုက်၏ (၁) နှစ်ပြည့်သော နေ့ရက်ဖြစ်သည်နှင့် အညီ ကြက်သားဆန်ပြုတ်နှင့် အီကြာကွေးတို့အား ၀ဋ်ကြွေးတော်ပြေကျောင်းတိုက်သို့ သွားရောက်၍ အာရုံဆွမ်းဆပ်ကပ် လှူဒါန်းပြီး နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)သို့ လာရောက်ငွေလှူဒါန်းကြသော အလှူရှင်များ၊ အသင်းသူ/ သားများ၊ ၀န်ထမ်းများ၊ သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်းသို့ လာရောက်ကုသကြသော လူနာများ၊ လူနာရှင်များအား အာဟာရအဖြစ် ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခဲ့ပါသည်။
နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)မှ မျိုးဆက်သစ်လူငယ်/ရွယ်များအတွက် ရည်ရွယ်ကာ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ ဘာသာရေး၊ ကျန်းမာရေးစသည့် အသိပညာ အထွေထွေ ဗဟုသုတ များ တိုးပွားစေရန် “သုခအလင်း” စာကြည့်တိုက်အား ၂၀၁၀၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၁၃) ရက်နေ့ (ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမွေးနေ့)တွင် သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း၏ အပေါ်ထပ်တွင် အောင်မြင်စွာ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/7152-2011-02-13-20-37-10
“သံဝေဂ”ရစရာ လမ်းကြောင်း (၂) ခု
နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)သည် သေဆုံးသွားသော ရုပ်အလောင်းများအား မီးသင်္ဂြိုလ်မှု ပြုလုပ်ပေးရာတွင် ယခုဆိုလျှင် မီးသင်္ဂြိုလ်ခ (၂) ဆ တိုးမြှင့်၍ ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာဌာန သို့ ပေးဆောင်၍ နာရေးကူညီမှုလုပ်ငန်းများကို နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ပျှမ်းမျှ (၄၅/၅၀) ဦးတို့ကို (အခမဲ့) ဖေးမကူညီသင်္ဂြိုလ်ပေးလျက် ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် ရဲမှုခင်းများဖြစ်သော (ရေနစ်၊ ရထားကြိတ်၊ လမ်းဘေးသေ၊ ဆွဲကြိုးချ .... ) စသည့် နာရေးကိစ္စများကိုပါ ထမ်းရွက်ကူညီဖေးမ ပေးလျှက်ရှိသည်။
ယနေ့ ၁၁.၂.၂၀၁၁ (သောကြာ) နေ့တွင် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)မှ ပို့ဆောင်ရသော နာရေး ကိစ္စများတွင် ထူးခြားသော သံဝေဂရစရာ နာရေးလမ်းကြောင်း (၂) ခုကို တွေ့ကြုံခဲ့ရသည်။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/7143-2011-02-11-09-47-35
နိုင်ငံကျော်အဆိုတော် တေးသံရှင် ခိုင်ထူး၏ ဖခင် ဦးသာထို အသက် (၉၂) နှစ်သည် ၄.၂.၂၀၁၁ (သောကြာနေ့) ည (၇း၃၀) နာရီအချိန်တွင် ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ် နေအိမ်၌ ကွယ်လွန်ခဲ့ပါသည်။
ယနေ့ ၅.၂.၂၀၁၁ (စနေနေ့) နံနက် (၁၀း၀၀) နာရီတွင် နေအိမ်မှ ရေဝေးသုဿန်သို့ နာရေး ကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) အစီအစဉ်ဖြင့် မီးသင်္ဂြိုလ်ခြင်းအား ကူညီဖေးမ ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါသည်။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2009-06-20-05-07-49/7131-2011-02-06-05-49-20
ရန်ကုန်မြို့၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ သရက်တောကျောင်းတိုက်၊ သစ်တော်ကျောင်းပဓါန နာယက ဆရာတော် ဦးသောဘန (ဘုန်းဘုန်းသော) သိက္ခာတော် (၅၇) ၀ါ၊ သက်တော် (၇၇) နှစ် သည် ၁.၂.၂၀၁၁ (အင်္ဂါ) နေ့တွင် ဘ၀နတ်ထံပျံလွန်တော်မူခဲ့သည်။
ဆရာတော်ကြီး၏ ရုပ်ကလပ် တော်အား ၅.၂.၂၀၁၁ (စနေနေ့) နေ့လည် (၂း၀၀) နာရီအချိန်၌ သရက်တောကျောင်းတိုက်မှ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ အစီအစဉ်ဖြင့် ပင့်ဆောင်ကာ ရေဝေးသုဿန်တွင် မီးသင်္ဂြိုလ်ခြင်း အခမ်းအနားကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2009-06-20-05-07-49/7132-2011-02-06-05-55-23
နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) တည်ရှိရာ အမှတ် ၁၃/က၊ ဗိုလ်မှူးဗထူးလမ်း၊ မြောက်ဒဂုံ မြို့နယ်၊ ၄၂ ရပ်ကွက် မြေနေရာ အနေအထားသည် ပလပ်စတစ် (ကြွတ်ကြွတ်အိပ်) အမှိုက်ပုံကြီး ဖြစ်သည်။ အဆောက်အဦးများ ဆောက်လုပ်ရာတွင် မြေကိုတူးယူ၍ ပုံမှန်အတိုင်း ဆောက်လုပ်၍ မရ။ စက်ပိုင်ကြီးများဖြင့် ပိုင်တိုင်များ ရိုက်သွင်း၍ အဆောက်အဦးများကို ဆောက်လုပ်ခဲ့ရသည်။ သာမန်မြေတွင် ဆောက်လုပ်သော အဆောက်အဦးများထက် ကုန်ကျငွေ (၃) ဆ ခန့်ပို၍ ကုန်ခဲ့သည်။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/7117-2011-02-01-02-09-08
နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)သည် ၂၀၀၁ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ (၁) ရက်နေ့မှ စတင်၍ အများ ပြည်သူတို့၏ နာရေးကိစ္စများကို (အခမဲ့) ကူညီပံ့ပိုး ဖေးမမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ ယခု ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါ ရီလ (၁) ရက်နေ့တွင် (၁၀) နှစ်တင်းတင်း ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အခမ်းအနား တစ်ရပ် ကျင်းပရန်အတွက် စီစဉ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်း ယင်းအခမ်းအနားအား စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပလိုခြင်း၊ စည်းကမ်းရှိရှိ စနစ်တကျ ပြုလုပ်လိုခြင်း၊ မြန်မာပြည်အနှံ နာရေးကူညီမှုအသင်း၊ လူမှုရေးအသင်း များအား ဖိတ်ကြားလိုခြင်း၊ အလှူရှင်အပေါင်းတို့အား ကြွရောက်စေလိုခြင်း ဆန္ဒများဖြင့် ယခုတည်ဆောက်လျှက် ရှိသော (ရန်ကုန်) ရုံးခန်း၊ စာကြည့်တိုက်၊ ပညာသင်ကြားရေးနှင့် လူမှုရေးသင်တန်းများ ပါဝင် သော အဆောက်အဦးသစ်ကြီး ပေါ်ထွန်းလာမည့် ဧပြီလ သင်္ကြန်ပွဲတော်အပြီး ၂၃ ~ ၂၄ (စနေနေ့/ တနင်္ဂနွေနေ့) (၂) ရက်တိုင်တိုင် ကျင်းပရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/7116-2011-02-01-02-05-57
ကိုကိုညီညီနှင့် ကျွန်တော်နှင့် ကျွန်တော့်ဇနီး ရွှေဇီးကွက်တို့ ရင်းနှီးမှုကာလကား ကြာမြင့်လှပြီ ဖြစ်သည်။ ကိုကိုညီညီသည် ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်လောကတွင် နာမည်ကြီးနေစဉ် ကာလကတည်းက ကျွန်တော်တို့နှင့် ခင်မင်ရင်းနှီးခဲ့သော သူငယ်ချင်းများ ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်၏ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား များတွင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရသည့် ဇာတ်ကောင်နှင့် လိုက်ဖက်သော ဆံပင်ပုံစံများကိုလည်း ဖန်တီး ပေးခဲ့သူလည်း ဖြစ်သည်။ ကိုကိုသည် လူချစ်လူခင်ပေါများပြီး အပေးအကမ်း ရက်ရောသူ ဒါနရှင် တစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။ ဘာသာတရားကိုလည်း ကိုင်းရှိုင်းသူလည်း ဖြစ်သည်။ ကိုကိုညီညီသည် နာမည်ကြီး ဆံသပညာရှင်များ ဖြစ်သည်နှင့်အညီ ကိုကိုညီညီ တည်းဟူသော Beauty Saloon ဆိုင် မြောက်များစွာနှင့် ဆံသပညာရှင်ပေါင်း မြောက်များစွာ မွေးဖွားပေးခဲ့သော ဆံသပညာရှင်လည်း ဖြစ်သည်။
ယခု ဦးကိုကို ဆုံးရှာပြီ။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2009-06-20-05-07-49/7107-2011-01-27-18-23-43
" သေရင် မီးခိုးနဲ့ပြာ . . . ပါသွားမှာက ကုသိုလ် အကုသိုလ် "
၂၀.၁.၂၀၁၁ (ကြာသပတေးနေ့) နေ့လည် (၃း၀၀) အချိန်ထိ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) တွင် တစ်နေ့တာ နာရေးကူညီမှုပေါင်း (၃၈) ဦးအား မီးသဂြိုလ်ပေးခြင်း၊ အအေးခန်းထားပေးခြင်း တို့ကို ကူညီဖေးမ လုပ်ဆောင်ပေးလျှက်ရှိရာ -
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/7091-q---------q
U Ra Zatt's 113th Birthday
ဇန်နဝါရီလ နှစ်ဆယ့်တစ်ရက်နေ့ နံနက် ၁၁ နာရီတွင် အာဇာနည်ခေါင်းဆောင် ဆရာကြိး ဥိးရာဇတ် ၏ (113) ကြိမ်မြောက် မွေးနေ့ဆုတောင်းပွဲ ကို ဗမာမွတ်စ္စလင်လူငယ်များက ရန်ကုန်မြို့လယ်ရှိ နေအိမ်တခုတွင် စုပေါင်းကျဉ်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။
အဆိုပါအခမ်းနားသို့ မွတ်စ္စလင်လူငယ်များအပါအ၀င် ဖိတ်ကြားထားသော လူငယ်စုစုပေါင်း 50 ခန့်တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
အခမ်းအနားတွင်ဆရာကြိး ဥိးရာဇတ် အား ရည်စူးပြိးကျမ်းမြတ် ကုရအာန်ဖတ်ကြားခါ စုပေါင်း ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပြိး ဆရာကြိး ၏ လွတ်လပ်ရေး ကျိုးပမ်းမှုများအကြောင်းကိုလည်း လူငယ်များ အချင်းချင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း ထို့နောက် မိဘမဲ့ခလေးငယ် ၁၂ ဥိးအတွက် စောင်များကိုလည်း လှူတမ်းခဲ့ကြကြောင်း သိရပါသည်။
သတင်း နှင့် ဓါတ်ပုံ များအား ကိုကို (ရန်ကုန်) မှ မေတ္တာဖြင့် ပေးပို့သည်။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/7093-2011-01-22-00-00-26
တစ်နှစ်ထက် တစ်နှစ်၊ တစ်လထက် တစ်လ
နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ (၁) ရက်နေ့မှစ၍ နှစ်သစ်တွင် လူမျိုးမရွေး၊ ဘာသာမရွေး၊ ဆင်းရဲချမ်းသာမရွေး လူသားတို့၏ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ နာရေးကိစ္စအ၀၀တို့ကို အင်တိုက်အားတိုက် အရှိန်အဟုန်မြင့်စွာဖြင့် အများပြည်သူတို့အတွက် ပေးဆပ်နိုင်ရန် သင်းလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးပွဲကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။
ယခု နှစ်သစ် ဇန်န၀ါရီလတွင် ကလေးသူငယ်များ၏ ပညာရေးအတွက် အင်္ဂလိပ်စာ အခြေခံသင်တန်း များ၊ လူငယ်မျိုးဆက်သစ်များအတွက် အဆင့်မြင့်အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းများ၊ သုခအလင်း စာကြည့် တိုက်မှလည်း စာပေဗဟုသုတများ ရရှိရန်အတွက်၎င်း၊ သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်းမှလည်း အများပြည် သူတို့ လှူဒါန်းထားသော မျက်စိခွဲစိတ်ခန်းသုံး အာရုံကြောစမ်းသပ်သည့် စက်ကိရိယာဖြင့် စတင်ကာ အများပြည်သူတို့၏ မျက်စိဝေဒနာများကို အချိန်တိုအတွင်း ကုသပေးလျှက်ရှိသည်။ မျက်စိခွဲစိပ်ခန်း အဆောင်ကိုလည်း ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်လျှက်ရှိသည်။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/7082-2011-01-19-20-51-32
ဂီတပညာရှင်များ သီဆိုပေးထားသော လူမှုရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး သီချင်းများကို အလှူရှင်များ အတွက် (ကန့်သတ်) အခွေအဖြစ် ဂုဏ်ပြုပေးအပ်ရန်အတွက် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ လုပ်ဆောင်ချက်၊ ပေးဆပ်မှု အရုပ်မြင်ကွင်းများအပြင် အဆိုတော်များ၏ သီဆိုမှုပုံရိပ်လွှာများပါရှိရန် သီးခြားရိုက်ကူးမှုများ ပြုလုပ်လျှက်ရှိရာ ယနေ့ ၁၉.၁.၂၀၁၁ (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) တွင် မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) အဆောက်အဦးအသစ်ပေါ်တွင် တေးရေး/ဆို ဆောင်းဦးလှိုင် သီဆို တီးခတ်ထားသော “ပျံသန်းသွား” အမည်ရှိ တေးသီချင်းအား ရိုက်ကူးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/7084-2011-01-19-20-59-28
ရှစ်သောင်းလေးထောင် ဓမ္မက္ခန္ဓာစေတီ ကိန်းဝပ်စံပယ်တော်မူသော ပန်းပေါင်းစုံ “လိုချင်တိုင်းပြည့် ယွန်းဘုရားကြီး” သည် (၉) ရက်တိုင်တိုင် ဒေသစာရီ လှည့်လည်အပူဇော်ခံခဲ့ပြီး သည့်နောက် ယနေ့ (၉) ရက်မြောက်သောနေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်း၊ ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း၊ ၄၂ ရပ်ကွက် မေတ္တာချောင်းကူးရပ်ရှိ ၀ဋ်ကြွေးတော်ပြေ စေတီတော်မြတ်ကြီးတည်ရှိရာ ရန်အောင်မြေကျောင်း တိုက်တွင် ပြန်လည်၍ သီတင်းမသုံးခင် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)သို့ ကြွချီကာ အပူဇော်ခံ ခဲ့ပါသည်။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/7059-2011-01-15-23-06-01
Maung Wunna's Funeral
စာရေးဆရာ ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ မောင်ဝဏ္ဏ အသက် (၆၅) နှစ် သည် ၁၁.၁.၂၀၁၁ (အင်္ဂါနေ့) နံနက် (၄း၂၀) နာရီအချိန်တွင် အဆုတ်ဝေဒနာဖြင့် ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီး ယနေ့ ၁၃.၁.၂၀၁၁ (ကြာသပတေးနေ့) နေ့လည် (၃း၀၀) နာရီအချိန်တွင် ရေဝေးသုဿန်၌ နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) အစီအစဉ်ဖြင့် မီးသဂြိုလ် ခြင်းအခမ်းအနားကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ယင်း အခမ်းအနားတွင် စာပေ၊ ဂီတ၊ ရုပ်ရှင် နယ်ပယ်အသီးသီးမှ အနုပညာသမားများ နှင့် ဆရာ မောင်ဝဏ္ဏ၏ အနုပညာကို ချစ်မြတ်နိုးကြသော ပြည်သူလူထုအပေါင်းတို့မှ လာရောက်၍ နောက်ဆုံးခရီးကို လိုက်လံပို့ဆောင်ကြသည်။
ဆရာ မောင်ဝဏ္ဏသည် အမှန်တကယ် ပန်းတွေနဲ့ဝေ၍ ကတ္တီပါဖိနပ်စီး ရွှေထီးဆောင်းကာ ဘ၀တစ်ပါးသို့ ထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2009-06-20-05-07-49/7051-2011-01-14-02-33-03
Maung Wunna's Will
ယနေ့ နံနက် (၆း၃၀) နာရီတွင် ဒါရိုက်တာ၊ စာရေးဆရာ ကိုဝဏ္ဏ တစ်ယောက် ကွယ်လွန် သွားပြီဟူသော သတင်းကို ကိုဝဏ္ဏ၏ တူဖြစ်သူ ဖိုးသောကြာမှ သတင်းပေးပို့သည့်အတွက် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများကို လျင်မြန်စွာရရှိရန် ပြောကြားပြီး နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) မှ နိုင်ငံ့ဂုဏ်ဆောင် ပြည်သူ့အကျိုးသယ်ပိုးပေးခဲ့သော (သဘာဝအုပ်စု) ၏ စာရေးဆရာ၊ ဒါရိုက်တာ ကိုဝဏ္ဏ အသက် (၆၅) နှစ် ရုပ်အလောင်းအား ရေဝေးသုဿန်အအေးခန်းသို့ သယ်ဆောင်ရန်အတွက် အထူးနိဗ္ဗာန်မော်တော်ယာဉ်အား အဆင်သင့်ဖြစ်ရန် မှာကြားခဲ့သည်။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/7036-2011-01-11-07-58-15
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/7021-2011-01-07-06-06-36
၁.၁.၂၀၁၁ (စနေနေ့) သည် ကျွန်တော်အတွက် အဖိုးမဖြတ်နိုင်သော မင်္ဂလာတရားနှင့် ပြည့်စုံသော နေ့ရက်တစ်ရက်ပင် ဖြစ်တော့သည်။
ထိုနေ့ရက်သည် ကျွန်တော်၏ဘ၀၊ ကျွန်တော်၏ လျှောက်လှမ်းနေသော လူသားအကျိုးပြု လမ်းမပေါ်သို့ ဆွဲခေါ်လမ်းပြပေးခဲ့သော ကျွန်တော်၏ ဓူဝံကြယ်၊ ကျွန်တော်၏ မဟေသီ ဒေါ်မြင့်မြင့်ခင်ဖေ (ခ) ရွှေဇီးကွက်၏ ကမ္ဘာမြေပြင်ပေါ်သို့ စတင်ရောက်ရှိလာသော နေ့တစ်နေ့လည်း ဖြစ်သည်။ နှစ်သစ်မင်္ဂလာနေ့ရက်တွင် မွေးဖွားခဲ့သော ကျွန်တော်ဘ၀ရဲ့ ကောင်းကျိုးအသစ် အသစ်တွေကို ဖန်တီးပေးခဲ့သော ရွှေဇီးကွက်တည်းဟူသော လူမှုအကျိုးဆောင် အမျိုးသမီးတစ်ဦး မွေးဖွားသန့်စင်လာသော နေ့ရက်တစ်ရက်လည်း ဖြစ်သည်။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/7003-2011-01-02-23-12-20
" ၂၀၁၁ အကြို "
၂၀၁၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ၂၀၁၁ ခုနှစ် အကြိုအဖြစ် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)မှ (အခမဲ့)နာရေးပို့ဆောင်မှုများ၊ (အခမဲ့)ဆေးဝါးကုသပေးမှုများအပြင် မျိုးဆက်သစ် လူမှုရေးသင်တန်း များ၊ ပညာရေးသင်တန်းများပါ အခမဲ့ဖွင့်လှစ်ပို့ချ ပေးခဲ့ပါသည်။ ယင်းကဲ့သို့ သင်တန်းများပို့ချရာတွင် လူမှုရေးသင်တန်းများကို နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)မှ ဥက္ကဌ ဦးကျော်သူ၊ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး ကိုဇင်ထွန်းအောင်၊ အလုပ်အမှုဆောင် ဒေါ်မေဇွန်ဦး၊ ဒေါ်ကြည်ကြည်စိန်တို့နှင့် အတွေ့အကြုံရှိသော အသင်းသား/သူတို့မှ ပို့ချပေးခဲ့သည်။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/7002-2011-01-02-23-05-45
" Buddha inaNight Club " ( II )
" နိုက်ကလပ် မှ မြတ်ဗုဒ္ဓ " အပိုင်း ( ၂ )
သာသနာတော်ကို စောင့်ရှောက်စေလိုတဲ့ ဆန္ဒနဲ့ မောင်ရန်မျိုးအောင်တွေ့ကြုံ ခံစားခဲ့ရတဲ့အတိုင်း တင်ဆက်လိုက်တာပါ။
(တစ်ချို့ပုံများ မသင့်တော်ပေမဲ့ သာဘာဝအမှန်အတိုင်း ဖြစ်စေချင် သိစေချင်လို့ ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။)
သဒ္ဓါကြည်ဖြူ အတုယူကာ သာသနာပြုနိုင်ကြပါစေ....။
သတင်း နှင့် ဓါတ်ပုံ များအား အရှင်ဧသက မှ မေတ္တာဖြင့် ပေးပို့သည်။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/2008-07-25-07-31-58/2008-08-30-03-23-18/6998-2010-12-30-06-55-33
" Buddha inaNight Club " ( I )
" နိုက်ကလပ် မှ မြတ်ဗုဒ္ဓ " အပိုင်း ( ၁ )
“ Rainy Days of L.A “
Written by Myo Chit Myanmar
Since I came to United States, exactly 16 Years, 11 Months ago in Jan 19th, 1993, this is the very first time that I remember raining heavily for more than 48 hours straight.
Americans, especially Californians hate weathers like this and they still have not yet learnt how to deal with the rain for many centuries.
Usually when we have rain here in Cali, it’s only like spraying very soft mist.
You can even walk right through it and not get soaked.
Even then these idiots still manage to get into accidents creatively and people always act like it’s the first time ever they have seen the rain, which drives me nuts every single time that happens.
Anyhow, I maybe the only person in United States that loves when it rains like this.
I love the rain for many reasons.
Please go to original link to read this article in FULL.
အများပြည်သူအတွက် အများပြည်သူကောင်းမှု (၂)
နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)သည် အများပြည်သူ (၇) ရက်သားသမီးတို့၏ နာရေးကိစ္စ အ၀၀နှင့် ကျန်းမာရေးအတွက် သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်းမှ အခမဲ့ ဆေးဝါးကုသပေးလျှက်ရှိရာ မင်းလှမြို့ နာရေးကူညီမှုအသင်းအတွက် နိဗ္ဗာယာဉ်လှည်းယာဉ် တစ်စီးအား လှူဒါန်းပေးခဲ့ပါသည်။
မင်းလှမြို့တွင် နာရေးကိစ္စဖြစ်ပေါ်ပါက နယ်ဓလေ့ထုံးစံအတိုင်း သေဆုံးသူ၏ နေအိမ်ရှေ့တွင် ရုပ်အလောင်းအား ထားရှိကြသည်။ ထို့ကြောင့် အသုဘချမည့် နေ့ရက်တွင် ယင်း နိဗ္ဗာန်လှည်းယာဉ် အား လူအားဖြင့်၎င်း၊ မော်တော်ယာဉ်ဖြင့်၎င်း ဆွဲယူသယ်ဆောင်ကာ သက်ဆိုင်ရာသုဿန်သို့ ပို့ဆောင်သဂြိုလ်ရာ၌ ယခင်ကထက် အဆင်ပြေချောမွေ့ နိုင်တော့မည်ဖြစ်သည်။ နိဗ္ဗာန်လှည်းယာဉ်၏ တန်ဖိုးမှာ ၁၈၀၀၀၀/- (တစ်ဆယ့်ရှစ်သိန်း) ကျပ်ခန့် ကုန်ကျခဲ့သည်။ ယင်း အလှူသည် အများ ပြည်သူတို့ လှူဒါန်းထားသော အလှူငွေဖြင့် အများပြည်သူတို့အတွက် တစ်ဆင့်လှူဒါန်းပေးရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/6930-2010-12-16-04-02-35
နဝမအကြိမ်မြောက် စာပေဟောပြောပွဲ (N.Y)
သတင်းဓါတ်ပုံ - ကိုသိန်းမင်း
သတင်းမူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/6923---ny
" American Spirit with Heavy Metal Case "
SURGEON GENERAL'S WARNING: Quitting Smoking Now Greatly Reduces Serious Risks to Your Health
This is for my bad ass smoker friends.
As you may already know my favorite brand " American Spirit " has madeabrand new production design withareal hard heavy metal casing.
I like to call it " Heavy Metal A.S ".
For my overly educated friends, needless to say A.S stands for " American Spirit ".
Guys, it's super cool and don't forget to tell your kids never to try it cause it's that BAD.
I meant super super BAD ;)
Original Link - http://myochitmyanmar.org/2008-07-25-07-33-03/2008-08-30-01-01-05/6913-q-american-spirit-with-heavy-metal-case-q
Daw Aung San Suu Kyi's son Kim Aris' visit has ended.
It was heart breaking to see this mother and son departing again.
ကျွန်တော် အရမ်း ဝမ်းနည်းပါတယ် အမေ
အမေ့ သားငယ် ကို အမေ ဘယ်လောက်ချစ်လဲ ကျွန်တော်သိတယ်
အမေ က စိတ်မာတော့ ခံနိုင်ပေမယ့် အမေ့ရင်ထဲမှာ ဘာတွေဖြစ်ကျန်ခဲ့မလဲ ဆိုတာ စိတ်ကို မာကျောလာအောင် ဘဝမှာ နာကျင်ထားဖူးတဲ့ သူတိုင်း နားလည်ပါတယ်
ကျွန်တော် တစ်ခုတော့ပြောချင်တယ် အမေ
အမေ့သားထက် မပိုတောင် အမေ့သားလိုဘဲ အမေ့ကို ချစ်တဲ့သားတွေ အမေ့အနားမှာရော ဟိုးအဝေးကြီးမှာ တကမ္ဘာလုံးမှာ ရှိနေပါတယ်
အမေ ဟာ ဘယ်တုန်းကမှ တစ်ယောက်ထဲမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး
အမေ ဟာ ကျွန်တော်တို့ရင်ထဲမှာ အမြဲ ရှိနေမယ့်အမေ
ကျွန်တော်တို့အားလုံးက အမေ့အတွက် အမြဲ နာကျင်နေမယ့်သားတွေ
အမေ့သားတွေ အမေ နဲ့တူတူ အမှန်တရားရဲ့ဘက်မှာ အမြဲရပ်တည်သွားမှာပါ
မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/6889-q-q
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် NLD မှ သံဃာတော်များအား သင်္ကန်းကပ်လှူ
သတင်းမူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/6907---nld---
၂၀၁၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၇) ရက်နေ့သည် ကျွန်တော့်အတွက်၊ ကျွန်တော်တို့အသင်း နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) အတွက်၊ ဗမာပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးအတွက် မဟာဆုံးရှုံးမှုတစ်ရပ် ပင်ဖြစ်တော့သည်။
၂၀၀၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၇) ရက်နေ့က ကျွန်တော် မေမြို့တွင် ကိုယ်တိုင်ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင်အဖြစ် ရိုက်ကူးနေသော “ဇာတ်ကြမ်း” DVD ဇာတ်ကားကို ရိုက်ကူးနေစဉ် ကျွန်တော်တို့ ၏ လူမှုရေး၊ ဘာသာရေး၊ အနုပညာရေးတို့တွင် ရှေ့ဆောင်လမ်းပြဖြစ်သော ကျေးဇူးရှင် ဘဘ ဦးသုခ ဆုံးပါးသွားကြောင်း သိရှိရသည်။ ထို့ကြောင့် ထုတ်လုပ်သူနှင့် ရုပ်ရှင်အဖွဲ့သားများ၊ သရုပ်ဆောင်များ အား တောင်းပန်လျက် ဘဘ ဦးသုခ၏ ကျန်ရစ်သော ခန္ဓာအား သဂြိုလ်မည့်နေ့ရက်၊ ဂူသွင်းမည့် နေ့ရက် နံနက် အစောဆုံးလေယာဉ်ဖြင့် ရန်ကုန်မြို့သို့ လျင်မြန်သောခြေလှမ်းတို့နှင့် ပြန်လာကာ ဂူသွင်းသဂြိုလ်မှုပြုလုပ်ပြီး ညနေ လေယာဉ်ဖြင့် လေးလံသော ခြေလှမ်းတို့ဖြင့် ပြန်သွားခဲ့ရသည်။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/6885-2010-12-07-18-48-55
" 2010 ရဲ့ အစောဆုံး ခရစ္စမတ်လက်ဆောင် "
ကျွန်တော့် အချစ်ဆုံး ငယ်သူငယ်ချင်းလေး အန်တီမေစည် (ခ) မေစည်သူအောင် (ခ) မိပ ရဲ့ X'Mas လက်ဆောင် Boomerang လေး ဒီနေ့ဘဲ ရောက်လာပါတယ်။
အဲ့ဒိ Boomerang လေးကို ၃ လ လောက် မိပ ကို ဂျီတိုက်ပြီးမှ မိပက စေတနာ အပြည့် နဲ့ ဆောင့်အောင့်ပြီး ပို့ပေးလာတာပါ။
ဒါကြောင့် Percel ကို ဖွင့်လိုက်လိုက်ခြင်းမှာတောင် မိပ ရဲ့ ဒေါသ အနံ့တွေ ရလိုက်ပါသေးတယ် :P
ဖွင့်ဖွင့်ခြင်းတုန်းကတော့ အိမ်ရှေ့မှာ ချက်ချင်းသွားဆော့မလို့ပါဘဲ။
ဒါပေမယ့် Boomerang လေးက အမဲလိုက်တဲ့ ပုံစံမဟုတ်ဘဲ အင်မတန် နူးညံ့ ပါးလျ လှပ နေတာနဲ့ ကျိုးသွားမှာ စိုးတာကြောင့် မဆော့ဖြစ်တော့ဘဲ အလှဘဲ သိမ်းထားဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် မိပကို ကျေးဇူးအထူးတင်သလိုဘဲ တကယ်လဲ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း ဆော့လို့ရမယ့် Marcho Hunting Version တစ်ခုလောက်လဲ ထပ်ဝယ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ :D
ကျွန်တော့် မွေးနေ့က June 30th မှ ပါ မိပက ကျွန်တော့်ထက် ၁၀ ရက်ဘဲ ကြီးပါတယ်
အပြည့်အစုံကို မူရင်း Link တွင် ဆက်လက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/6886-2010---
လူ ၂၅၀၀ ရရင် ဗမာတွေ အလင်းပွင့်ပြီ
အမြင်အာရုံများ အေးမြတောက်ပလာစေရန် ရည်ရွယ်၍ စက္ခုအလင်း မှုန်ဝါးခြင်း၊ တိမ်စွဲခြင်း တို့ကို ကျွန်တော်တို့ နိုင်သလောက် စွမ်းဆောင်ဖေးမ ကုသပေးခဲ့သည်မှာ (၂၀၀၇) ခုနှစ် မတ်လ မှစ၍ ယနေ့အချိန်ထိ မျက်စိဝေဒနာရှင်ပေါင်း (၁၂၀၀၀) ယောက် ကျော်တို့အား ကုသခွဲစိပ် ပေးခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/publishing/2008-07-25-07-55-44/6881-2010-12-07-05-28-37
၆.၁၂.၂၀၁၀ (တနင်္လာ) နေ့တွင် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)မှ ရေဝေးသုဿန်နှင့် ကျီစု သုဿန်များသို့ နာရေးဖြစ်ပေါ်လာပါက အသုဘရှု ခန်းမဆောင်အတွင်း ရုပ်အလောင်းတို့ ထားရှိရန် အတွက် အသုံးပြုလျှက်ရှိသော စတီးတွန်းလှည်း (၂) စီးကို သွားရောက်လှူဒါန်းပေးခဲ့ပါသည်။ တန်ဖိုး ငွေအားဖြင့် စတီးလက်တွန်းလှည်း တစ်စီးလျှင် ၃၂၀၀၀၀/- (သုံးသိန်းနှစ်သောင်းကျပ်) တိတိ ဖြစ်ပါသည်။
ဤ ရုပ်အလောင်းတင် လက်တွန်းလှည်းများမှာ တစ်နေ့လျှင် ရုပ်အလောင်း ပေါင်း (၆၀) ကျော်အား တင်ဆောင်အသုံးပြုနေရသော လက်တွန်းလှည်းများ ဖြစ်သည်။
ယခု သက်ဆိုင်ရာ သုဿန်များရှိ အသုဘရှု ခန်းမဆောင်အတွင်း လက်ရှိအသုံးပြုလျှက် ရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး (စည်ပင်သာယာ)မှ အသုံးပြုနေသော ရုပ်အလောင်းတင် လက်တွန်းလှည်းများ လိုအပ်နေသောကြောင့် အများပြည်သူတို့ အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်၍ နာရေးကူညီမှု အသင်း(ရန်ကုန်)မှ သွားရောက်ကာ လှူဒါန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/6882-2010-12-07-05-32-59
ယနေ့ နှစ် (၉၀) ပြည့် အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် သန်လျင်မြို့နယ် ကျောင်းသားလူငယ်များမှအမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ အထိမ်းအမှတ် ဟောပြောဆွေးနွေးပွဲ နှင့် ကဗျာရွတ်ဆိုပွဲ အခမ်းအနားကို ယနေ့ နေ့ လည်နှစ်နာရီက သန်လျင်မြို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အတွင်းရေးမှူး (CWC) အဖွဲ့ ဝင် ရှေ့နေဦးစိုးဟန်အိမ် တွင်ကျင်းပခဲ့ကြသည်။
အခမ်းအနားကိုသန်လျင်မြို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်မြို့ နယ်စည်းအဖွဲ့ ဝင်များ၊NLD လူငယ်များ၊ ကျောင်းသားလူငယ်များ၊ NLD သွေးအလှူတာဝန်ခံ ကိုညီနှင့်အဖွဲ့ များ၊ မြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးလိုလားသူ ကျောင်းသားလူငယ်များနှင့် အခြားစိတ်ပါဝင်စားသူပြည်သူများ အပါအ၀င် အင်အား ခုနှစ်ဆယ့်သုံးယောက် တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
ယင်းအခမ်းအနားကို အခမ်းအနားအစီအစဉ် ခြောက်ရပ်ဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး ကျောင်းသားလူငယ်များက သံချပ်များ ကဗျာများ ရွတ်ဆိုခဲ့ကြသည်။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/6843-2010-12-02-08-38-29
နှစ်စဉ်ပြုလုပ်မြဲဖြစ်တဲ့ Los Angeles Auto Show မှာ လာရောက်ပြသထားတဲ့ 2011 Model Cars တွေကို Los Angeles သို့မဟုတ် America နဲ့ အဝေးမှာ နေထိုင်တဲ့ ကျွန်တော့် မိတ်ဆွေတွေ လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်အောင် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
သတင်း နှင့် ဓါတ်ပုံ - မျိုးချစ်မြန်မာ
သတင်းမူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/6844-2010-los-angeles-auto-show
Daw Aung San Suu Kyi & son Kim attended World AIDS Day at NLD main office
Daw Aung San Suu Kyi and son Kim Aris in World's AIDS Day Ceremony held at NLD office in Yangon, Myanmar.
Original Link - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/6847-daw-aung-san-suu-kyi-a-son-kim-at-world-aids-day
မန္တလေး မှ ကရုဏာရှင်များ ရခိုင်ပြည်နယ် ဂီရိ ဆိုင်ကလုန်း ဒုက္ခသည်များသို့ လှုဒါန်း
Our Mandalay Ga Yu Nar Shin Myar; Group of Organizations Donate During Emergency Relief of Giri Cyclone Rakaing State!'
I would like to show you some photos via attachments in this mail.
Our Mandalay Ga Yu Nar Shin Myar; Group of Organizations, CBOs, FBOs, LNGOs donate during emergency reliefs of Giri Cyclone in Rakaing State.
Asaresult, we organize and gather over 40 different organizations in Mandalay to response Giri Cyclone and Emergency Reliefs.
We have been there first and second times. But we will go there our third time or the last.
We will leave on 3rd or 4th December and bringing all of our donations there.
During Mandalay Water Flood and Giri Cyclone responses, we have got same vision to work out together and we are very unique.
Nickey D. Diamond
Executive Director of YSCM
Original Link - http://myochitmyanmar.org/news/2009-09-16-01-21-48/6842-2010-12-02-08-13-13
(၉) ကြိမ်မြောက် ဆံသကုသိုလ်
၂၇.၁၁.၂၀၁၀(စနေနေ့) တွင် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)သို့ ဆံသပညာရှင် ကိုဂျွန်ဆင် ဦးစီးသော ဆံသပညာရှင်များ လာရောက်၍ ဆံသ ကုသိုလ် ယူခဲ့ပါသည်။ ဆံသပညာရှင်ပေါင်း(၂၀)ဦး တို့သည် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)ရှိ ၀န်ထမ်းများ၊ အသင်းသူ/သားများ၊ အပြင် သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်းသို့ လာရောက် ဆေးဝါးကုသကြသော လူနာများ၊ လူနာရှင်များအား ဆံပင်ညှပ်ပေးခြင်း၊ ဆံပင်ဆေးဆိုးပေးခြင်း စသည့် မိမိတို့ တတ်စွမ်းသော ဆံသပညာရပ်ဖြင့် ကုသိုလ်ဖြစ် အခမဲ့ ပေးဆပ်ခဲ့ကြသည်။
ထိုကဲ့သို့ ဆံသပညာရှင် ကိုဂျွန်ဆင် ဦးစီးသော ဆံသပညာရှင်များသည် မိမိတို့ အလုပ်အားလပ်သည့် အချိန်တိုင်း လာရောက် ကုသိုလ်ဖြစ် ထမ်းဆောင်ပေးသည်မှာ (၉) ကြိမ်မြောက် ရှိခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ဤသို့ ဆံသပညာရပ်ဖြင့် ကုသိုလ်ယူခြင်းသည် လူသားတို့၏ တစ်ကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းခြင်း အတွက် အဓိက ဖြစ်သောကြောင့် ကုသိုလ် အကျိုးတရား များစွာ ရရှိမည်ဖြစ်ပါတော့သည်။
သတင်း နှင့် ဓါတ်ပုံ များအား ကိုကျော်သူ မှ မေတ္တာဖြင့် ပေးပို့သည်
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/6812-2010-11-28-23-08-31
တိုင်းရင်းသား ပရဟိတ မျိုးဆက်သစ်ခေါင်းဆောင်များ
၂၇.၁၁.၂၀၁၀ (စနေနေ့) နံနက် (၁၀း၃၀) နာရီအချိန်တွင် နာရေးကူညီမှုအသင်းသို့ မြန်မာနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိ တိုင်းရင်းသားပရဟိတ ဗုဒ္ဓဘာသာလူငယ်များအဖွဲ့မှ လူငယ်များ၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနှင့် လူမှုအကျိုးပြု လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ကြရန်အတွက် လူမှုရေးနှင့် ပရဟိတ လုပ်ငန်းများကို စွမ်းစွမ်းတမံ ဆောင်ရွက်နေသော ဦးကျော်သူ၊ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်သန်းမြင့်အောင် နှင့် အလုပ်အမှုဆောင်များမှ လိုက်လံရှင်းလင်း ပြသကာ လူမှုရေးလုပ်ငန်း ဆိုရာ၌ နိုင်ငံသားအားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်ကြောင်း၊ ပရဟိတ လုပ်ငန်းဟူသည် မိမိကိုယ်ကျိုး အတွက် အမြတ်ထုတ်ခြင်း ကင်း၍ မိမိပတ်ဝန်းကျင်မှ လူအများ၏ အကောင်းဆုံး အကျိုးစီးပွားကို ဖော်ဆောင်ပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပြီး တိုင်းရင်းသား ပရဟိတ လူငယ်များမှ မသိသည်များကို မေးမြန်းခြင်းတို့ကို ပြန်လည်ဖြေကြား ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/6813-2010-11-28-23-10-52
ပုံပြင်ရိုးရိုးကလေးတစ်ပုဒ် မှ ဂန္တ၀င်မှတ်တိုင်တစ်ခုသို့
မုဒုံမြို့မှာ နေတဲ့ ဦးမြင့်ဦး+ဒေါ်ပြုံးကြည် တို့ရဲ့သား ကိုထက်နေလင်းဦး နှင့် ရန်ကုန်မြို့မှာ နေတဲ့ ဦးတင်ဝင်း+ဒေါ်ခင်မေညွန့် တို့ရဲ့ သမီး မကြည်သာအေးချမ်း တို့သည် နိုဝင်ဘာလ(၂၆)ရက်နေ့မှာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားကို အခြေခံပြီး လူသားဆန်စွာ အတူတူလက်တွဲ ရင်ဆိုင် ကျော်ဖြတ်သွားနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ လူကြီးစုံရာမှာ နိုဝင်ဘာ(၂၆)ရက် သောကြာနေ့ ဆီဒိုးနားဟိုတယ်တွင် ထိမ်းမြားလက်ထပ်ခဲ့ပြီးသည့်နောက် နိုဝင်ဘာလ(၂၇) ရက်နေ့တွင် နေအိမ်သို့ မပြန်ခင် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)သို့ လာရောက်၍ မင်္ဂလာပေါ် မင်္ဂလာထပ်သည့် အနေဖြင့် နာရေးလမ်းကြောင်းကို ကုသိုလ်ဖြစ် လာရောက်ကာ မင်္ဂလာဇနီးမောင်နှံတို့သည် နိဗ္ဗာန်ယာဉ်အား ကိုယ်တိုင် လာရောက် မောင်းနှင်ကြသည်။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/6811-2010-11-28-23-06-35
၂၅.၁၁.၂၀၁၀ (ကြာသပတေးနေ့) နံနက် (၁၀း၀၀) နာရီ အချိန်တွင် နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) တည်ရှိရာ အမှတ် ၁၃/က၊ ဗိုလ်မှူးဗထူးလမ်း၊ ၄၂ ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်သို့ Myanmar Solar Rays Co.,Ltd. မိသားစု (အမှတ် - ၄၂၊ ပါရမီလမ်း၊ (၆) ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်) မှ နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်)တွင် အသုံးပြုရန် TOYOTA Light Truck တန်ဖိုးငွေကျပ် ၁၁၃၀၀၀၀၀/- (တစ်ရာတစ်ဆယ့် သုံးသိန်း)တန် မော်တော်ယာဉ်တစ်စီးအား လာရောက်လှူဒါန်းသွားပါသည်။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/6809-2010-11-26-04-55-26
Daw Aung San Suu Kyi re-united with her younger son after being apart for 11 years
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သူ့ရဲ့သားငယ်ကိုထိန်လင်းတို့ ဆယ့်တနှစ်ခန့်အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ် ဆုံတွေ့
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့တွင် ရက်အတန်ကြာအောင် ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ စောင့်ဆိုင်းခဲ့ရတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ သားငယ် ကိုထိန်လင်း (ခ) ကင်မ် အဲရစ်စ် (Kim Aris) ဟာ ၂၀၁၀ နိုဝင်ဘာ ၂၃ ရက်နေ့ နံနက် ၇ နာရီ ၃၀ မိနစ်ခန့်မှာ ရန်ကုန် မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်ကို ဆိုက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ ထိုသို့ ဆိုက်ရောက်လာတဲ့အခါ မြန်မာလုံခြုံရေးအရာရှိတွေဟာ ကိုထိန်လင်း (ကင်မ်အဲရစ်စ်) ကို လိုက်ပါ စောင့်ကြပ်ပေးခဲ့ပြီး ပုံမှန် လေဆိပ် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ လုပ်စရာ မလိုဘဲ မိခင်ဖြစ်သူနဲ့ တွေ့နိုင်ခဲ့သလို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်း လုံခြုံရေး ၀န်ထမ်းများက စောင့်ကြပ်ထားကာ သူ့သားငယ်နဲ့ အမြန်ဆုံး တွေ့နိုင်အောင် စီစဉ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ကိုထိန်လင်း (ကင်မ်အဲရစ်စ်) ဟာ မိခင်နဲ့ တွေ့ဆုံတဲ့အခါ သူ့လက်မောင်းမှာ ရေးထိုးထားတဲ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်အလံကို သူ့မိခင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ပြသခဲ့ပါတယ်။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2009-09-16-01-06-35/6795-2010-11-23-23-47-33
၂၂.၁၁.၂၀၁၀ခုနှစ်(တနင်္လာနေ့) နံနက် ၁၁း၀၀ နာရီအချိန်တွင် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ဒါရိုက်တာဟောင်းဦးကျော်သူ နှင့်ဇနီးဒေါ်ရွှေဇီးကွက်၊ စာရေးဆရာမသန်းမြင့်အောင်၊ အဆိုတော်အနဂ္ဂ၊ သံသာဝင်း၊ ဟန်ထူးလွင်(ကျားပေါက်)နှင့်ဇနီး၊ ဒါရိုက်တာမင်းထင်ကိုကိုကြီးစသည့် စာပေ၊ ရုပ်ရှင်၊ ဂီတအနုအညာမောင်နှမများသည် တောင်ဒဂုံရှိမဖြူဖြူသင်း ထူထောင်ဖွင့်လှစ်ထားသော HIV ရောဂါဝေဒနာရှင်များ နားခိုရာဂေဟာသို့သွားရောက်ပြီး ဒံပေါက်ထမင်း၊ ရေခဲမုန့်၊ အ၀တ်အစားများနှင့် ငွေများကို လူသားချင်းကူညီထောက်ထားသော စိတ်ဓါတ်တို့ဖြင့် သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ကြသည်။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/6787-2010-11-22-23-52-00
အောင်အတိတ် … အောင်နိမိတ်
နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ (၉) ကြိမ်မြောက် စုပေါင်းမဟာဘုံကထိန်ပွဲတော်ကြီးကို ယနေ့ ၂၀.၁၁.၂၀၁၀ (စနေ) နေ့၌ စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ အောင်ပွဲခံကျင်းပ ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၀ ခုနှစ်အတွင်း ကျင်းပခဲ့သော မဟာဘုံကထိန်ပွဲတော်များတွင် ယခု (၉) ကြိမ်မြောက် ကျင်းပပြုခဲ့သော စုပေါင်းမဟာဘုံကထိန်ပွဲတော်သည် အစည်ကားဆုံး၊ အသိုက်မြိုက်ဆုံး၊ အညီညွတ် ဆုံးပွဲတော် ဖြစ်တော့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ၀ါရင့်နိုင်ငံရေးသမားကြီးများကို ကန်တော့
ဒီနေ့(20.11.2010) နံနက် (9း00)မှာ ၀ါရင့်နိုင်ငံရေးသမားများက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ခြင်းအတွက် ဂုဏ်ပြုပွဲလေးလုပ်ပါတယ်၊
သခင်သိန်းမောင် အိမ်မှာလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ အခမ်းအနားမှာ တရင်းသားကိုယ်စားလှယ်တွေ တက်ရောက်ပါတယ်၊။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း ၀ါရင့်နိုင်ငံရေးသမားများကို ကန်တော့ခဲ့ပြီး အခန်းအနား အောင်မြင်စွာပြီးခဲ့ပါတယ်။
သတင်း နှင့် ဓါတ်ပုံ များအား မှ ဇော်မိုးအောင် (Korea) မှ မေတ္တာဖြင့် ပေးပို့သည်
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/6782-2010-11-21-00-40-58
နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)သည် ဆင်းရဲချမ်းသာ၊ လူမျိုးဘာသာ၊ မိတ်ဆွေရန်သူမရွေး တို့၏ နာရေးကိစ္စများကို အခမဲ့ ထမ်းဆောင်ပေးလျှက်ရှိရာ ၁၂.၁၁.၂၀၁၀ (သောကြာ) နေ့ ည (၉း၀၀) နာရီအချိန်၌ ဘဘ ဦးလွင်၏ ဇနီး ဒေါ်တင်တင်မလေး အသက် (၈၈) နှစ်သည် ဘ၀တစ်ပါးသို့ ပြောင်းလဲသွားပါ၍ ၁၄.၁၁.၂၀၁၀ (တနင်္ဂနွေ) နေ့ ညနေ (၃း၀၀) နာရီအချိန်တွင် ရန်ကုန်မြို့ အမှတ် ၁၅၊ ကမ္ဘောဇရိပ်သာ၊ ဗဟန်းမြို့နယ် နေအိမ်မှ ရေဝေးသုဿန်သို့ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ ရှေ့ပြေးမော်တော်ယာဉ်၊ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) ၀တ်ရွတ်အဖွဲ့ မော်တော်ယာဉ်နှင့် နိဗ္ဗာန် မော်တော်ယာဉ်ကြီးတို့ဖြင့် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ သယ်ဆောင်၍ မီးသဂြိုလ်ပေးခဲ့ပါသည်။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/2008-07-25-07-31-58/2008-07-25-08-06-59/6740-2010-11-15-04-03-10
၁၄.၁၁.၂၀၁၀ (တနင်္ဂနွေ) နေ့ နံနက် (၉း၀၀) နာရီအချိန်တွင် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) ၏ အောင်ပွဲခံသော နေ့တစ်နေ့ပင် ဖြစ်တော့သည်။
အကြောင်းမှာ ၂၀.၁၁.၂၀၁၀ (စနေ) နေ့တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်သော နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ စုပေါင်းမဟာဘုံကထိန်ပွဲကို အသင်းသူ/ သားများစုပေါင်း ပါဝင်လှူဒါန်း၍ စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပမည်ဖြစ်ရာ ဒိုးပတ်ဝိုင်းများ၊ ရှမ်းအိုးစည်ဝိုင်းများဖြင့် ၀ဋ်ကြွေးတော်ပြေဆရာတော်ကြီး၏ ကျောင်းတိုက်သို့ ပဒေသာပင်များ သယ်ဆောင် ပို့ဆောင်ကြမည်ဖြစ်သည်။
ထို့အတွက် ၁၄.၁၁.၂၀၁၀ (တနင်္ဂနွေ) နေ့ နံနက် (၉း၀၀) နာရီတွင် “အောင်သိဒ္ဓိ” ရှမ်းအိုးစည် သာသနာပြုအဖွဲ့မှ လာရောက်၍ ရှမ်းအိုးစည်အက၊ ဓါးသိုင်းအက များဖြင့် လာရောက်ကုသိုလ်ယူ ဖျော်ဖြေမှုတစ်ရပ်ကို ကထိန်ပွဲတော်အကြိုအဖြစ် လာရောက်ကပြ ဖျော်ဖြေရာတွင် အောင်ပွဲခံ ရှမ်းတီးလုံးများဖြင့် တက်ကြွ မြိုင်ဆိုင်စွာ ကပြခဲ့သည်။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/6741-2010-11-15-04-07-51
မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/2008-07-25-07-33-03/64-2008-08-01-21-50-27/6744-2010-11-15-04-56-37
Daw Aung San Suu Kyi is released.
Amay Suu & Ko Kyaw Thu
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/6735-2010-11-14-21-46-17
Awaiting Daw Aung San Suu Kyi
Yangon (Nov 12th 2010)
Many citizens and journalists have gathered infront of NLD's main office in Bahan, Yangon, Myanmar, in hopes that SPDC would realesed their beloved leader Daw Aung San Suu Kyi who has been unfairly detained under house arrest for total of more than two decades.
Please read full article at http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/6721-2010-11-12-19-10-43
What really happened in western part of Burma by Giri Cyclone?
In this mail, you can see what really happened in western part of Burma by Giri Cyclone.
Our interfaith team from YMCA Mandalay is managing and helping people from Myay Pone and Kyaut Phyu's area.
Under the YMCA Mandalay's leadership, we have got over 30 different Orgs, CBOs, FBOs and LNGOs.
We have been doing for emergency release and possible support for Giri infectious people in Myay Pone and Kyat Phyu.
We have been doing our best. But we still need your kind response for emergency donation.
If you are interested in donation, you all can contact with our key persons who are mentioned in this mail.
If you have any question and future information, you can feel free to mail me.
I will be looking forward your kind response.
Please see the rest of this article @
နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ ခံယူချက်မှာ ဆင်းရဲချမ်းသာ လူမျိုးဘာသာ မိတ်ဆွေရန်သူ မရွေးတို့၏ နာရေးကိစ္စများကို အခမဲ့ကူညီ ဖေးမပံ့ပိုး ဆောင်ရွက်ပေးရခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ သည် ဘ၀တစ်ပါးသို့ ပြောင်းသွားကြကုန်သော ရာထူးဂုဏ်သရိန် အဆင့်အတန်း ခွဲခြားခြင်းမရှိဘဲ လူသားတစ်ဦးအနေဖြင့် သတ်မှတ်ကာ ဈာပနကိစ္စ အ၀၀ကို အဆင်ပြေချောမွတ်စွာ အောင်အောင်မြင် မြင်ဖြစ်ရန် ကူညီဖေးမပေးကြသော ဗြဟ္မစိုရ်တရားလေးပါးကို လက်ကိုင်ပြုထားကြသော လူမှုရေး သမားများဖြစ်ကြသည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါဖြင့် ဆေးရုံတတ်၍ ခွဲစိတ်မှု ပြုလုပ်စဉ်က သွေး (၂) ကြိမ်၊ မကွယ်လွန်ခင် ၂၀၁၀ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် ဆေးရုံပြန်လည် တက်ရောက်စဉ် လိုအပ်သော သွေးအတွက် (၂) ကြိမ်တိုင်တိုင် ဥက္ကဌ ဦးကျော်သူထံ အကူအညီတောင်း၍ အသင်းသူ/သားများက သွားရောက်၍ သွေးလှူဒါန်းမှုများကို ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါသည်။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/6701-2010-11-10-19-21-38
၉.၁၁.၂၀၁၀ (အင်္ဂါ)နေ့တွင် စာရေးဆရာ၊ ဒါရိုက်တာ တင်သန်းဦး၏ ဈာပနအခမ်းအနား ပြုလုပ်နေစဉ် ဦးကျော်သူနှင့် ကျန်ရှိသော အသင်းသူ/သားများ မှ ဘ၀နတ်ထံ ပျံလွန်တော်မူခဲ့သော သက်တော် (၉၃) နှစ်၊ ၀ါတော် (၇၃) ၀ါ ရှိသော ထားဝယ် မောင်းမကန် ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တပုည ၏ အန္တိမဈာပန အခမ်းအနားအား သွားရောက်ကျင်းပ ပြုလုပ်ပေး ခဲ့ရပါသည်။
ကံသာကျောင်းသစ်၊ ရေတာရှည်လမ်းသစ်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်မှ ရေဝေးသုဿန်သို့ ဆရာတော် ကြီး၏ ရုပ်ကလပ်တော်အား ဥက္ကဌ ဦးကျော်သူနှင့် အသင်းသူ/သား များအပြင် ထားဝယ် ရေလုပ်ငန်းလူငယ်အဖွဲ့များ၊ တပည့် ရဟန်းသံဃာတော်များနှင့် ပူးပေါင်းလက်တွဲ ကာ ရွှေရောင်ကားတလစ် နိဗ္ဗာန်ယာဉ်ပေါ်သို့ အဆင့်ဆင့်တင်ဆောင်ကာ ၀တ်ရွတ်အဖွဲ့၊ ဆရာတော်ကြီး၏ ရုပ်ပုံတော်နှင့် ပန်းခြင်းများတင်ဆောင်ရန် ရှေ့ပြေးမော်တော်ယာဉ်နှင့် ဆရာတော်သံဃာတော်များ၊ တပည့် ဒါယကာ ဒါယကာမများဖြင့် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ အန္တိမဈာပန အခမ်းအနားကို နေ့လည် (၁း၀၀) နာရီတွင် ကျင်းပပြုလုပ် ကုသိုလ်ယူ ဖေးမပေးခဲ့ပါသည်။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/6702-2010-11-10-19-23-11
အဓိဋ္ဌာန် (၉) ရက်ပြည့် စုပေါင်းအမျှပေးဝေပွဲ
ဟောင်းဘ၀အထွေထွေ တော်စပ်ကြခဲ့သော မိခင်ဖခင် ဆွေမျိုးသားချင်း မိတ်သင်္ဂဟအပေါင်း တို့အား၎င်း၊ ယခုတော်စပ်ခပင်း ဆွေရင်းမျိုးခြာ မိဘမောင်ဘွား နှမသားချင်းများအား၎င်း၊ ကျွတ်သင့် ကျွတ်ထိုက်သော ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းအား၎င်း၊ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)မှ ကူညီဖေးမ သဂြိုလ် ပေးခဲ့သော မကျွတ်မလွတ်သေးသည့် သတ္တ၀ါအပေါင်းတို့အား၎င်း၊ ကျွတ်ရန်လွတ်ရန် စိတ်ရည်သန်၍
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/6575-2010-10-24-07-13-20
၂၃.၁၀.၂၀၁၀ (စနေနေ့) သီတင်းကျွတ်လပြည့် အဘိဓမ္မာနေ့တွင် အများပြည်သူတို့ ဘုရားသွား၊ ကျောင်းသွား ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကို ပြုလုပ်နေကြသော်လည်း ကျွန်တော်တို့၏ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) အသင်းသူ/သားများနှင့် ၀န်ထမ်းများသည် (အခမဲ့) နာရေးကူညီမှု (အခမဲ့) ဆေးဝါးကူညီမှု အစရှိသည့် လုပ်ငန်းများကို ထမ်းဆောင်ပေးဆပ်လျှက် ရှိပါသည်။
ထိုသို့ ထမ်းဆောင်ပေးဆပ်လျှက်ရှိရာ ရန်ကုန်မြို့ ခြောက်ထပ်ကြီးဘုရားကြီးတိုက်၊ ပတ္တမြား ကျောင်းဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တပညာသီဟသည် ၂၁.၁၀.၂၀၁၀ (ကြာသပတေးနေ့) ညနေ(၆း၀၀) နာရီ အချိန်တွင် ဘ၀နတ်ထံ ပျံလွန်တော်မူသွားပါ၍ ကြွင်းကျန်ရစ်သော ဥတုဇရုပ်ကလာပ်တော်အား သီတင်းကျွတ်လပြည့် ၂၃.၁၀.၂၀၁၀ (စနေနေ့) ညနေ (၃း၀၀) နာရီတွင် နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) ဥက္ကဌ ဦးကျော်သူ ဦးဆောင်၍ အသင်းသူ/သားများ၊ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) ၀တ်အဖွဲ့တို့ ပင့်ဆောင်ကာ ရေဝေးသုဿန်တွင် သင်္ဂြိုလ်ပေးခဲ့ပါသည်။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/6576-2010-10-24-07-22-32
ယနေ့ ၁၈.၁၀.၂၀၁၀ (တနင်္လာ) နေ့တွင် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) ရုံးချုပ်ရှိရာ မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်၊ ၄၂ ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်မှူးဗထူးလမ်းသို့ ပြည်မြို့ ရွှေပေါက်ပင်တောရကျောင်းတိုက် ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသောမာစာရ သည် ပြည်မြို့မှကြွချီလာရာ နံနက် (၄း၀၀) နာရီအချိန်တွင် ရောက်ရှိ ခဲ့ပါသည်။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/6536-2010-10-19-02-02-46
Lashio Thein Aung's Night
လားရှိုးသိန်းအောင် ည (Los Angeles)
၁၉၇၀ ခုနှစ် ဝန်းကျင်များက ဂျင်မီဂျက်သို့မဟုတ် လားရှိုးသိန်းအောင် လို့ အောင်မြင်ကြော်ကြားခဲ့တဲ့ ဦးဂျင်မီ ရဲ့ ဂီတဖျော်ဖြေပွဲ လေးတစ်ခုကို အမေရိကန် နိုင်ငံ ကယ်လီဖိုးနီးယား ပြည်နယ်က မွန်ထရီပတ်ခ် မြို့လေးမှာ ရှိတဲ့ အောင်ဇေခန်းမ မှာ ဒီညနေ ၆ နာရီကနေ ည ၁၁ နာရီထိ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
ဒီပွဲမှာ L.A မြို့ခံ အဆိုတော် တစ်ဦးဖြစ်သူ နီနီဝင်းရွှေ အပါအဝင် အခြား မြို့ခံ တေးသံရှင် အချို့လဲ ပါဝင် သီဆိုခဲ့ကြတဲ့အတွက် ဦး Jimmy ရဲ့ အမှတ်တရ ရှိုးလေး အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးသွားခဲ့တဲ့အတွက် ကြွရောက်လာသူ မိတ်ဆွေများ နဲ့ အခမ်းအနား ဖြစ်မြောက်အောင် အောင်ဇေခန်းမ ကို အသုံးပြုခွင့်ပေးခဲ့တဲ့ ဦးဇော်ထွန်း နဲ့ အန်တီ တို့ ဇနီးမောင်နှံကိုလဲ အားလုံးရဲ့ကိုယ်စား ကျေးဇူးပါနော်။
60's - 70's famous singer Lashio Thein Aung (AKA) Jimmy Jack has performedaprivate show in Monterey Park, Califonia with fans and friends.
သတင်း နှင့် ဓါတ်ပုံ မျိုးချစ်မြန်မာ
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/6527---los-angeles
ပေါ်ပြူလာဂျာနယ် အယ်ဒီတာချုပ် ကိုမျိုး(မြန်မာစာ) နှင့် မရည်မွန် (ယဉ်ကျေးမှုတက္ကသိုလ်) တို့၏ သမီးလေး၊ စံရွှေမြင့်၏ အရှင်သခင်ဖြစ်သော ကာတွန်း ဦးမြင့်သိန်း + ဒေါ်တူးတူးမြင့်သိန်း (အလင်္ကာဝတ်ရည်မဂ္ဂဇင်း အယ်ဒီတာ) တို့၏ မြေး ဖွေးဖွေး (ခ) Violet မြတ်ပန်းဖွေး၏ (၈) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ အမှတ်တရအဖြစ် ဖွေးဖွေး ရေးဆွဲထားသော ပန်းချီကားချပ်များအား ဒဂုံမြို့နယ်၊ ဗိုလ်ရာညွှန့်လမ်း၊ အမှတ် (၅၄)၊ 1-E ရှိ New Zero Art Space ပန်းချီပြခန်းတွင် ၁၀.၁၀.၂၀၁၀ (တနင်္ဂနွေနေ့) နံနက် (၁၀း၀၀) နာရီတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းပြပွဲအား ၂၀၁၀၊ အောက်တိုဘာ (၁၀) ရက်နေ့မှ (၁၂) ရက်နေ့အထိ (၃) ရက်တိုင်တိုင် ပြပွဲပြုလုပ် ကျင်းပသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/6493-2010-10-10-17-26-22
မမြင်လိုတော့ပါ၊ မကြားလိုတော့ပါ၊ မပြောလိုတော့ပါ
ကမ္ဘာမြေပြင်ပေါ်သို့ ရောက်ရှိသည့် နေ့ရက်၊ အချိန်ကာလများ မတူညီကြသော်လည်း ကမ္ဘာ မြေပြင်မှ ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားချိန်တို့သည် အဘယ်ကြောင့် တူညီတိုက်ဆိုင်နေကြပါသလဲ။
မရဏမင်းသည် ဥပဒေမရှိ။ လူတန်းစား မခွဲ။ အချိန်ကာလ သတ်မှတ်ချက်မရှိ၊ ဆင်းရဲချမ်းသာ မိတ်ဆွေရန်သူ မခွဲ၊ အသက်ကြီးငယ်မရွေး ခေါ်ဆောင်သွားလေ့ရှိသည်။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/6490-2010-10-08-18-15-52
" မနုဿ ပန်းပွင့်များ "
ပေးပို့သူ - မသီတာမြင့်
သတင်းမူရင်း - http://myochitmyanmar.org/2008-07-25-07-33-03/2008-08-30-01-01-05/6491-q---q
ဥပဒေ မရှိတဲ့ မရဏမင်း
ရင်နှင့်ဖွယ် ဖြစ်ရပ်ကလေးတစ်ခု ။	။ ၇.၁၀.၂၀၁၀ (ကြာသပတေးနေ့) နံနက် (၉း၃၀) နာရီ အချိန်တွင် တောင်ဒဂုံမြို့နယ်နေ ကွယ်လွန်သူ ဒေါ်အုံးရီ အသက် (၆၇)နှစ် နှင့် သားဖြစ်သူ ဦးခင်ဦး အသက်(၄၈) နှစ်တို့၏ ရုပ်အလောင်းများကို နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)က အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်သန်းမြင့်အောင်နှင့် အသင်းသားများ၊ ၀န်ထမ်းများမှ နိဗ္ဗာန်ယာဉ် (၂) စီးဖြင့် သွားရောက် သယ်ဆောင်ကာ ကျီစုသုဿန်သို့ ပို့ဆောင်မီးသင်္ဂြိုလ်ပေးခဲ့သည်။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/6489-2010-10-08-06-00-57
ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ဒေါ်တင်တင်လှ အသက် (၆၈) နှစ်သည် ၂.၁၀.၂၀၁၀ (စနေနေ့) နံနက် (၆း၄၅)နာရီ အချိန်၌ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင် ကွယ်လွန်အနိစ္စ ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ ကျန်ရစ်သော ရုပ်ခန္ဓာအား ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှ ရေဝေးသုဿန် အအေးခန်းသို့ နာရေး ကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)က သွားရောက်သယ်ဆောင် ကူညီပေးခဲ့ပါသည်။
ယနေ့ ၄.၁၀.၂၀၁၀ (တနင်္လာနေ့) နံနက် (၁၁း၀၀) နာရီအချိန်တွင် ရေဝေးသုဿန်၌ နာရေး ကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)က အလှူမီနီယမ် မှန်ခေါင်းဖြင့် ဈာပနအခမ်းအနား ပြင်ဆင် ပေးကာ အသင်းသူ/သားများ၊ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) ၀တ်အဖွဲ့မှ သံဝေဂလင်္ကာများ ရွတ်ဖတ်ပူဇော် အမျှပေးဝေခြင်းတို့ကို ကုသိုလ်ဖြစ်ပေးဆပ် ကူညီပံ့ပိုး ပေးခဲ့ပါသည်။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/6477-2010-10-05-00-37-33
လူသာဆုံးတယ် ကျန်တာမရှုံးတဲ့ သားဂျာနယ်ကျော်
ဦးမိုးဟိန်း (သားဂျာနယ်ကျော်)သည် ၂၃.၉.၂၀၁၀ (ကြာသပတေး) နေ့ နံနက် (၉း၀၀) နာရီ အချိန်တွင် တစ်ဘ၀ခန္ဓာကို စွန့်ပစ်၍ ကမ္ဘာမြေပြင်မှ ထွက်ခွာသွားခဲ့သည်။ ဆရာမိုးဟိန်း၏ ရုပ်ခန္ဓာအား ရွှေဂုံတိုင်အထူးကုဆေးရုံကြီး (SSC)ုမှ ရေဝေးသုဿန်အအေးခန်းသို့ နာရေးကူညီမှု အသင်း(ရန်ကုန်)က သွားရောက် သယ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါသည်။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/6427-q----q-
" စနစ်ဟောင်းကိုပယ် စနစ်သစ်နှင့်စပြီ "
လူသေလျှင် လူသေကို မကိုင်ချင်ကြ၊ မထိချင်ကြ၊ ရပ်ကွက်ပြင်ပတွင် သေဆုံးလျှင် ရပ်ကွက်တွင်းသို့ မသွင်းချင်ကြ၊ လူသေ၏ ခန္ဓကိုယ်အား တိရစ္ဆာန်ပမာ ကြမ်းတမ်းစွာ ကိုင်တွယ်ခြင်း၊ တိရစ္ဆာန်မသာများကြတော့ ခုတ်ထစ်ချက်ပြုတ် မြိန်ရည်ရှက်ရည် စားသောက်ကြ … စသည့် အယူသည်းမှုဝါဒများ ဒိဋ္ဌိအယူစွဲများ ပပျောက်အောင် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)သည် နေ့စဉ် နာရေးလမ်းကြောင်းများတွင် နာရေးရှင်၊ ရပ်ကွက်သူ/သားများအား ရှင်းလင်း ပြောကြားကာ အယူသည်းမှု တိုက်ဖျက်ရေးကို လုပ်ဆောင်ပေးနေကြသည်။
သတင်းအပြည့်အစုံကို မူရင်း Link တွင်ဆက်လက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/6416-2010-09-24-20-36-12
၂၀၁၀ ခုနှစ် အတွင်းတွင် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည့် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) ၀တ်ရွတ်အဖွဲ့ သည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်အတွင်း နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ ဈာပန ပို့ဆောင်မှုလမ်းကြောင်း ၁၀၀၀၀ (တစ်သောင်း) ပြည့် အခမ်းအနားတွင် ပွဲဦးထွက်အဖြစ် ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပြီးသည့်နောက် . . .
ယနေ့ ၂၃.၉.၂၀၁၀ (ကြာသပတေး) နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် လှိုင်မြို့နယ်နေ ဦးအုန်းမောင် အသက် (၇၃) နှစ် နာရေးလမ်းကြောင်းအား နေအိမ်မှ ရေဝေးသုဿန်သို့ တိုက်ရိုက်မီးသင်္ဂြိုလ်မည် ဖြစ်သည့်အတွက် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) ၀တ်အဖွဲ့က မော်တော်ယာဉ်တစ်စီးဖြင့် လိုက်လံ ရွတ်ဖတ်ပူဇော် အမျှပေးဝေ ခဲ့ပါသည်။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.org/news/2008-07-25-07-37-31/6418-2010-09-24-20-42-29
"very very nice picture and exclusive"
Jai Oun Khay
"မြတ်စွာဘုရားရဲ.ရှေ.မှာ ဘယ်လိုအလှ၊ မိုက်မှုမျိုးလာပြိုင်မဆို သူကိုယ်တော်တိုင် အောင်မြင်ပြီး ဇိနဗုဒ်ဓေါ ဆိုတာ ထင်ရှားပြီးသားပါ။ သူတို.လုပ်ချင်ဟာကို လုပ်ခွင်.ပါစေ ဒေါသလေး ထိမ်းချုပ်ထားဦးနော်........မြတ်စွာဘုရားရဲ. ဂုဏ်တော်ကဲ.ရဲ.သူတိုင်း ဒီဘ၀ နောက်ဘ၀ ဘယ်လိုဆိုးကျိုးရမယ်ဆိုတာ သိပြီမဟုတ်လား။"
NDK SUMANA SENGWAN